ထဘီနီနီ အရညျရှနျးနပွေီ – My Blog
ကို့သဲလေးက ယူနီဖောငျးလေးနဲ့ လှလိုက်တာကွာ ခါးတိုအကငြ်္ီအဖွူ နီရဲရဲထဘီလေးနဲ့ ယဉျယဉျလေးလှနတေဲ့ ခဈြသူလေးကို ကြ နျော ကွညျ့ငေးနမေိတယျ။ ပွီးတော့ ကုတငျစောငျးမှာ ထိုငျရငျး ခါးကိုဆှဲဖကျလိုကျတော့ သကျစုခိုငျ အသာရုနျးတယျ။ ထဘီလဲ လိုကျဦးမယျကိုရယျ မလဲနဲ့ကှာ။ ဒီယူနီဖောငျးလေးနဲ့မှ ပိုလိုးကောငျးမှာ သက်စုက ကနြေျာ့ကိုမကျြစောငျးထိုးတယျ။ ကို့ချဈသူ သူနာပွုဆရာမလေးကို ယူနီဖောငျးဝတျလေးနဲ့ ပိုလုပျခငျြလို့ ဟှနျး အဝတျတှေ ပကေုနျမှာပေါ့ ပွနျလြှျောရငျ စငျပါတယျ သကျရဲ့ ပွောရငျး ထဘီနီလေးပျေါက ပေါငျသားအိအိကို လကျနဲ့ပှတျသပျပေးနလေိုကျတယျ။
သက်စုက ခေါငျးပျေါဆောငျးထားတဲ့ ကဒျအဖွူလေးကို ခြှတျပွီး ကနြေျာ့ရငျခှငျထဲ ခေါငျးလေးတိုးဝငျတယျ။ ထူပွညျ့ပွညျ့ နီနုနု နှုတျခမျးသားလေးကို ပွှတျခနဲ ကနြျော ငုံနမျးစုပျယူလိုကျရငျး ခါးလေးကို တငျးတငျးဖကျထားလိုကျတယျ။ နှုတျခမျးခငျြး နမျးစုပျသံ တပွှတျပွှတျနဲ့အတူ သက်စုရဲ့ ညညျးသံလေး။ အကငြ်္ီပျေါကနေ နို့မို့မို့လေးကို အသာဆုပျညှဈတော့ အငျးဟငျးဟငျး ကိုရယျ သ က်စုလက်ကလေး ကနြေျာ့ပေါငျကွားထဲ ဝငျလာတယျ။ တောငျမတျနတေဲ့ ကနြေျာ့ဒုတျဟာ လကျနှေးနှေးလေးရဲ့ အထိတှကွေ့ောငျ့ ဒုံးပျံ ပမာ။ ပုဆိုးကို ခြှတျပဈလိုကျပွီး ကနြေျာ့ဒုတျကို သက်စု ပှတျသပျဆုပျညှဈတယျ။ ကဈဆငျဆှဲနရေငျးကနေ ကွီးလိုကျတာကိုရယျ။ ဟိုတခါလောကျ မကွမျးနဲ့နျော။ သဲနာလို့ အငျးပါ။ ဒီခါ ဖွညျးဖွညျးနဲ့ ကောငျးကောငျး လိုးပေးမယျ အဟငျ့ သကျစုထဘီနီလေး ကို အပျေါလှနျတငျပီး ကနြျော ကိုယျလုံးခငျြးပူးကပျလို့ ကုတငျပျေါ လှဲခလြိုကျတယျ။
ကနြျောနဲ့ သက်စုရဲ့ လိုးခနျးအကွောငျး မပွောခငျ ပွောစရာတခြို့ အရငျပွောမယျနျော။ သက်စုက ကနြေျာ့ထကျ ငယျတယျ။ သူနာပွု သငျတနျးဆငျးပွီး ဆေးရုံမှာ တာဝန်ကျစ။ အသက်က ခုမှ ၂၃ နှဈ။ ကနြျောနဲ့ ရညျးစားဖွဈတာ တဈနှဈကြျောပွီ။ ဒါပမေဲ့ နို့ကိုငျ ဂှငျးထု တ ယောကျပစ်စညျး တယောကျ ကိုငျဖူးရုံပဲ။ သက်စုကို လိုးခှငျ့ရတာ ခုမှ ၃ကွိမျမွောကျပဲ ရှိသေးတယျ။ လူကွီးတှေ ခရီးသွားလို့ အိမျမှာ ကနြျောတယောကျတညျး ရှိတဲ့ည သက်စုကို ချေါအိပျတာ။ ပထမတော့ သူ မအိပျရဲဘူး ဘာညာ ငွငျးသေးတယျ။ တျောကီပဈရတာ ပေါ့။ အဲဒီည အတူအိပျရငျး အောကားအတူကွညျ့ပွီး အရလိုးလိုက်တာ။ ပါကငျလေးကို ဖွုတျခှငျ့ရခဲ့တာ။ ကနြျော ကံကောငျးပါ တယျ။ သက်စုက ကနြျောနဲ့မှ ရညျးစားဆိုတာကို သိတာ။ ကနြျောက သူ့အခဈြဦးပေါ့။ ပထမဆုံး ယောကျြားအထိအတှတှေ့ေ သက်စု အတျောဖွတျသနျးလိုကျရတယျ။ ဥပမာ နို့စကိုငျ နှုတျခမျးစစုပျတုနျးကတို့၊ သူ့အဖုတျကို ကနြျော စကိုငျတုနျးကတို့။ လကျနဲ့ ပါကငျ အဖုတျမို့အိအိလေးကို စကစားပေးနခြေိနျကဆို နှုတျခမျးကို အတငျးကိုကျပီး အျောညညျးတာ။ တျောသေး လူမရှိတဲ့ နရောမှာမို့ပေါ့။
သကျစုလကျလေးထဲ ကနြေျာ့ဒုတျ ထညျ့ပေးလိုကျတဲ့ ပထမအကွိမျကဆိုရငျ တကိုယ်လုံး ဓာတ်လိုကျသလို တုနျနတော။ သူနာပွုတကျ လိငျကိစ်စ စာထဲသငျရပမေဲ့ တကယျ့ယောကျြားတယောကျရဲ့ စံခြိနျမှီလီးတံကွီးကို ထိတှလေို့ကျရခြိနျမှာ အပြိုစဈစဈလေးသကျစု ဘယျခံနိုငျမလဲ။ နောကျပိုငျးတော့ လီးကို အရမျးကွိုကျပဲ။ အဖုတျထဲ မဝငျဖူးခငျကတညျးက ကနြေျာ့ဒုတျကို စှဲနတော။ ပထမဆုံး လီးစုပျခိုငျးတုနျးက မကျြရညျပါကတြယျ။ ပွီးတော့လညျး အစုပျကြှမျးသှားတာပါပဲ။ ကဲ ကနြျောတို့လိုးပှဲ စမယျနျော။ တတိယ အကွိမျမွောကျ သကျစုအဖုတျထဲ ကနြေျာ့လီးသှငျးခနျးပေါ့။ စောစောကပွောသလို ကုလငျပျေါလှဲအိပျပွီး တယောက်ကို တယောကျ နှူးဆှပေးနရေငျး အဖုတျဝထဲ အသာလေး ဒုတ်ကို ဖိသှငျးလိုကျတယျ။
အ ကို ရှီး ကပျြစီးနတေဲ့ အဖုတျပေါကျလေးထဲ ကနြေျာ့လီး တဆုံးတိုးဝငျသှားတယျ။ အို ကဈြကဈြ ထိလိုက်တာ ကို့လီးကွီးကို ခဈြ တယျ သဲက ကို့ကိုခဈြတာလား ကို့လီးကို ခဈြတာလား အဟငျ့ ကို့လီးကို ပိုခဈြတာကှယျ ခဈြဦးကှာ ကဲ ဖတ်ခနဲ ကနြျော ဆှဲ ဆောကျတယျ။ အို့ ကို ကို အဟငျ့ဟငျ့ အရငျ ၂ခါ လိုးဖူးပမေဲ့ ခုလို ယူနီဖောငျးနဲ့ မဟုတ်ဘူး။ အိမျနဝေတျစားကို ခြှတျလိုးတာ။ ခု ကြ နျော ပိုဖီးလာနတေယျ။ ခဈြသူစဖွဈတညျးက တနကေ့ရြငျ သက်စုကို ယူနီဖောငျးလေး ဝတျခိုငျးပီး လိုးမယ်လို့ ကွုံးဝါးထားတာလေ။ သက်စုရဲ့ တငျကားကားလေး ထဘီနီလေးနဲ့ သိပျကွညျ့ကောငျးတာကိုး။
ကနြျော ခဈြသူရဲ့ဖငျသားကို ထဘီကွားနှိုကျပွီး ဆှဲညှဈရငျး လိုးတယျ။ အကငြ်္ီကို နှိပျသီးဆှဲဖွုတျ၊ ဘျောလီလှနျတငျပွီး နို့ကို တပွှတျပွှတျ စို့တယျ။ ယားတယျကှယျ။ အဟငျ့ ခဈြလား သဲ ခဈြတယျ။ ဟငျ့ ဖွညျးဖွညျးလုပျလို့ ကနြျော စိတျထပွီး အား ပါသှားတယျ။ တခြီးပွီးရငျ လီးစုပျပေးနျော သကျ အငျးပါကှယျ လှကွေီးထိုးနဲ့ပဲ တခြီ ဆှဲလိုးနမေိတယျ။ သက်စုက တဟငျ့ဟငျ့နဲ့ သူခဈြတဲ့ ကနြေျာ့လီးအရသာကို ခံစားနတေယျ။ ကို့ရဲ့နာဈလေးကို ကိုသိပျခဈြတယျ အဟငျ့။ ကိုက ယူနီဖောငျးနဲ့ဆို ဘာလို့ ပို ကွိုကျတာလဲ ဆှဲဆောငျမှုရှိလို့ပေါ့သဲရဲ့။ ကို သဲကို ယူနီဖောငျးလေးနဲ့ မွငျရငျ လီးပိုတောငျတာ အိုကှယျ ထဘီနီလေးအောကျက အိုးလုံးလုံးလေးကို ပွေးညှဈခငြိရော ဟငျ့ ကိုမှမဟုတ်ဘူး။ ယောကျြားအတျောမြားမြား သဲတို့လို နာဈလေးတှကေိုဆို အိုလိုးခငျြ တာ အို ဘာလို့လဲ နာဈတှကေ အပွုစုပိုကောငျးတာတဲ့။ ဒါထက်ကို နာဈယူနီဖောငျးလေးနဲ့ မိနျးမက လိငျစိတျပိုထစတေဲ့ ပုံစံလေး ကိုးကှယျ ပွောရငျး ဆှဲလိုးတယျ။ ပါးတှကေို နမျးတယျ။ နို့သီးခေါငျးကို ဆှဲငုံတယျ။
အ။ အဟငျ့ဟငျ့။ ဆောငျ့ကှာ အားရပါးရ ကနြျော ဆှဲလိုးရငျး လရေတွေ တပဈပဈ ပနျးထှကျကုနျတယျ။ အို ကိုပွီးသှားပီ။ ကောငျး လား အငျးပေါ့ သဲ မပွီးသေးဘူးကှယျ ပွီးအောငျ လုပျပေးမှာပေါ့ သဲရဲ့ ကနြျောက လီးကို ဆှဲခြှတျ့ပီး သက်စုကို ဖကျထားလိုကျ ရငျး ခနနားတယျ။ လက်က နို့စိုငျလေးတှကေို ကစားပေးနတေယျ။ သက်စုက နညျးနညျးပြော့သှားတဲ့ ကနြေျာ့လီးကို ပှတျသပျကစား ပေးနရေငျး ဒါနဲ့လေ ယောကျြားတှကေ တကယျပဲ သူနာပွုဆရာမလေးတှကေို လိုးခငျြကွတာလား တကယျပေါ့ သဲရဲ့။ ကိုဆို အခု ယူနီဖောငျးလေးနဲ့ လိုးရတာ သိပျကောငျး။ ငါ့ချဈသူ နာဈလေးပါလားလို့ တှေးလိုးတာ။ ဒါမို့ မွနျမွနျပွီးသှားတာ အဟငျ့ ဒါမို့ဟုတျ မယျ။ သဲ ဆေးရုံသှားရငျ တခြို့ယောကျြားတှေ သဲကို ကွညျ့တာ မကျြလုံးကြှတျမတတျပဲ ထူးဆနျးတယျ။ ကနြျော တမြိုးလေး ခံစား လိုကျရတယျ။ ကိုယျ့ခဈြသူကို တခွားယောကျြားတှကွေညျ့တာ စိတျတော့တိုသလိုလိုပဲ။ ဒါပမေဲ့ ခုလို လိုးနခြေိနျ ပွောတော့ ရငျထဲ တမြိုးပဲ။
ဘယျနရောကို ကွညျ့တာလဲ ကိုကလညျး နောကျပိုငျးကိုပေါ့ ဒီနရောကိုလား လို့မေးရငျး သက်စု ဖငျသားနှဈဖကျလုံးကို လကျနှစိ ဖကျနဲ့ ဆုပျနယျလိုကျတယျ။ ဟငျ့ ကွညျ့မှာပေါ့ ကို့ချဈသူ ထဘီနီလေးနဲ့ အိုးကော့ကားကားလေးက လမျးလြှောကျရငျ တုနျတုနျအိ အိ ဘယျညာလှုပျနတောကို အငျးနျော ကွညျ့ရငျး သက်ကို သူတို့လိုးခငျြမှာပဲ။ ဒီနာဈလေးကို လိုးလိုကျရရငျတော့ကှာ တို့၊ ထဘီနီ လေး လှနျတငိပွီး အိုးလေးထဲ လီးသှငျးရရငျတို့ မှနျးနကွေမှာ အာ ကိုကလညျးနျော။ မဟုတ်တာ တကယျ။ အဲ့တငျပါးနှဈဖကျနားက စောကျပတျကွီးကိုလညျး မွငျယောငျကွညျ့ကွမှာ အှနျး ပွောရငျး ကနြျော စိတျထလာတယျ။ ဖတ်ဖူးတဲ့ အပွာစာတှထေဲက ကတျ ကိုး စိတ်ဆိုတာ ဒါများလား။ ကိုယျ့ခဈြသူ ကိုယျ့မိနျးမကို တခွားသူနဲ့ ပေးလိုးခငျြတာမြိုး။ ကတြျောကတော့ လကျတှမှေ့ာ ပေးမလိုး ခငျြပါဘူး။ စိတျကူးနဲ့ ဆိုရငျကော။ ရငျထဲ တလှပျလှပျဖွဈသှားတယျ။
သဲကို သဲနဲ့နီးစပျတဲ့ ယောကျြားတှေ မှနိးထုကွမှာပဲကှာ ကိုနျော။ မဟုတ်တာ ဟုတျတယျ။ ကို့သဲက လိုးခငျြစရာလေးကို။ ယောကျြား တှေ ဂှငျးထုတဲ့အခါ သဲကို မှနျးမှာပေါ့ စိတျဆိုးမှာစိုးပမေယျ့ သက်စု စိတျမဆိုး။ စိတျမဆိုးတဲ့အပွငျ ကနြေျာ့ကို ပိုတိုးဖက်ကာ လီးကို တငျးတငျးဆုပျတယျ။ ကနြေျာ့ဒုတျ ထောငျးခနဲ တောငျတကျလာတယျ။ သဲ ဟငျ ကို သဲကို ဘယျလိုမှနျးကွလဲ သိလား ဟငျ့အငျး နားထောငျခငျြလား ပွောကွညျ့လေ ကို ဥပမာ သဲ သူငယျခငျြးတယောကျယောကျ ဂှငျးထုတဲ့အခါ သဲကို မှနျးတယျ ပေါ့။ သူက လကျနဲ့ လီးကို ကိုငျထုရငျး စိတ်ကူးထဲ သဲကို လုံးတီးခြှတျလိုကျမယျ။ ပွီး သဲနို့လေးကို ညှဈမယျ။ ပါးစပျနဲ့စို့မယျ အို အ ဟငျ့ ကနြျောထငျတယျ။ သက်စု ဖီလျးလာပုံရတယျ။ ဒါနဲ့ ပိုဖီလျးအောငျ သူ့အဖုတျကို လကျနဲ့ပှတျ အစေ့ကို လကျကွားညှပျခပြေေး ရငျး ဆကျပွောတယျ။ စိတ်ကူးထဲ သဲအဖုတ်ကို ခုလို ကိုငျကစားမယျ အို အစလေ့ေးကို ကိုခသြေလို သူခနြေမေယျ အဟငျ့ ပွီး သဲ အဖုတျထဲ သူ့လီးကွီး ထိုးသှငျးပီး သကျစုရယျ သကျစုရယျ လို့ စိတ်က ရရှေတျပွီး သဲကို လိူးနသေလို ခံစား ဂှငျးတိုကျတာပေါ့ ကို ရယျ။
တမြိုးပဲ။ သဲ စိတျလှုပျရှားလိုကျတာ။ အရငျက အဲဒါမြိုး မတွေးမိဖူး။ ကိုပွောမှ တှေးမိတော့တယျ ကနြျော ပိုရငျခုနျသှား တယျ။ သက်စုကို ကနြျော အဲဒီလို ခံစားစခေငျြတာလေ။ သဲကို အဲ့လိုမှနျးပွီး စိတျကူးနဲ့ တကျလိူးနကွေတဲ့သူတှေ နညျးမှာမဟုတျဘူး အဟငျ့ သကျစုအဖုတျထဲ ပနျးထညျ့နတေယျဆိုပွီး လရေတွေ ပနျးထုတျကွတာလညျး မနညျးလောကျဘူး ဟငျ့ သဲ တှေး ကွညျ့စမျး။ သဲ ပတျဝနျးကငြိမှာ သဲကို ဘယျသူ မှနျးထုလောကျမလဲ သက်စုက ခနစဉျူစားတယျ။ ပွီးတော့ ကို သိလား။ သဲ ခု တှေး မိပွီး ရငျအရမျးခုနျလာတယျ။ သဲနဲ့ ဆယျတနျးအတနျးတူ သူငယျခငျြးတှေ သဲကို ကွိုကျတဲ့သူတှေ ရှိတယိ။ သဲပွနျမကွိုကျခဲ့လို့။ သူ တို့ရော သဲကို အဲ့လိုပဲ မှနျးမှာပေါ့နျော အငျးပေါ့။ ဆယျတနျးက ဂှငျးထုတတျနပေီလေ သဲရ။ အဲ့ကတညျးက သဲကို မှနျးလိုးကွမှာ ပေါ့ အ ကိုရယျ ကနြျော သူ့အစကေို့ပိုခပြေေးတယျ။
လက်တဖက်က နို့ကို ကစားပေးတယျ။ သက်စု အတျောဖီးလျတကျလာမှနျး သိသာတယျ။ အသံလေးက လှိုက်ဖိုလို့။ သဲလေ ပွောပွမယျ ကိုရယျ။ ကိုစိတ်ဆိုးမလားပဲ။ သဲ ခုမှပွနျစဉျးစားမိတာ။ သဲအကိုဝမျးကှဲလေ။ နှဈဝမျးကှဲလောကျတော့ တျောတယျ အငျး ကိုတော့ သူ့ ကို မသိဘူး။ ကိုသီဟထှနျးတဲ့။ သူ အိမျလာခြိနျမှာ သဲက ရခြေိုးပီး အိမျခနျးထဲဝငျ ထဘီလဲနတော။ သူ ဟိုဘကျခနျးထဲ ဝငျပွီး သဲ ထဘီလဲနတောကို ခိုးကွညျ့တာ။ သဲက အမှတျမထငျ မွငျတော့ သူ လှစ်ခနဲ ထှကျသှားတယျ။ သဲလညျး မသိမသာ နလေိုကျတယျ။ အဲ့ ညနေက သူခြောငျးတဲ့ နံရံအောကျမှာလေ ပဈခြှဲခြှဲနဲ့ ဘာအရေတွေလဲမသိဘူးလို့။ ခုမှ စဉျးစားမိတာ ဒါဆို ကိုသီဟထှနျးက သဲ ထဘီလဲနတော ခိုးကွညျ့ပွီး ဂှငျးထုသှားတာပေါ့ ဟငျ့ သဲအကိုက သဲအဖုတ်ကို လိုးခငျြနတောပဲ အဲ့နကေ့ သဲထဘီလဲတော့ နို့တှေ တငျပါးတှေ ပေါငျတှေ တစှနျးတစ မွငျမှာ။ အဲ့တော့ ဂှငျးထုလိုကျတာပေါ့ အဟငျ့ဟငျ့ သူ့လီးကွီး သဲအဖုတျထဲ ထိုးထညျ့ပွီး လိုး နတေယျလို့ သူခံးစားပွီး ဂှငျးထုမှာပဲ။ ခဏခဏ အ သက်စုလက်ကလေးက ကနြေျာ့လီးကို ဂှငျးတိုကျပေးနတေယျ။
သဲ ဟငျ ကို သဲကို ဖီလျးအသဈ ပေးမယျ။ မကျြလုံးမှိတျ ဟုတျ မကျြလုံမှိတျရကျလေး ဂှငျးတိုကျပေးတယျ။ ကိုသီဟထှနျး လီး ကို သဲမွငျဖူုးလား အို ဘယျလိုမွငျဖူးမလဲလို့ ကိုသီဟထှနျး လီးက အကွီးကွီးနမှောပဲ အာ ဘယျသိမလဲ ကိုသီဟထှနျးက သဲကို လိုးခငျြနတော။ သူ အာသာပွအေောငျ သဲလ ကျလေးနဲ့ ဂှငျးထုပေးလိုကျပါလား ဟာ ကိုနျော။ မဟုတ်တာ သက်စု မကျြလုံးဖှငျ့ ကွညျ့လကျြ အျောတယျ။ စိတျကူးနဲ့ ထုပေးလိုကျကွညျ့ပါလား ဟငျအငျး။ ကိုနျော။ ဘာလို့ သူများဟာကို ပေးထုခိုငျးနတောလဲ သဲ စိတျလှုပျရှားမှာ။ သိလား။ မယုံ စမျးကွညျ့ ဟငျအငျကှာ။ မောငျနှမကို သူတောငျ သူ့ညီမကို ဂှငျးထုမှနျးတာပဲ ဟာကွာ ကဲ ပါ။ မကျြလုံးမှိတျ။ ခု သဲကို ကိုသီဟထှနျး ဖကျထားတယျ ပွောရငျး သူ့ကို အသာလေး ဖကျလိုကျတယျ။ သဲက ကိုသီဟထှနျး လီး ကွီးကို ကိုငျလိုကျ။ ပွီး ဂှငျးထုပေးလိုကျ အို သူ ပွောတဲ့အတိုငျးတော့ လုပျတယျ။ ကနေျာ့လီးကို တရှရှဆုပျညှဈတယျ။ ဂှငျးထု တယျ။
သူက သဲနို့လေးကို ငုံစို့မယျ ပွောရငျး သကျစုနို့လေးကို ငုံပွီး လြှာနဲ့ကလိပေးလိုကျတယျ။ သက်စု တအီးအီး ညညျးတယျ။ တငျပါးပါ ကွှတကျတယျ။ လကျကလညျး ကနြေျာ့လီးကို ဆကျတိုကျကွမျးကွမျး ထုပေးတယျ။ ကိုသီဟထှနျး လီးက ကွီးလားသဲ အဟငျ့ ကွီးတယျ ကို့လီးနဲ့ ဘယျသူ ပိုကွီးလဲ ကိုသီဟထှနျးလီးက ပိုကွီးတယျ။ အား အဟငျ့ဟငျ့ ကိုရယျ။ ရငျတုနျတယျ ကဲ ထ။ ကိုသီ ဟထှနျးကို လီးစုပျပေးလိုကျနျော အဟငျ့ဟငျ့ ကိုနျော ထပါ ကနြျော ထူပေးတယျ။ သက်စု ထထိုငျတယျ။ မျက်လုံးမှိတ်ထားလို့ ပွောပွီး ကနြေျာ့လီးကို ပါးစပ်နား တပေ့ေးလိုကျတော့ သက်စု ဒဈဖြားလေးကို ငုံတဟျ။ အား ကောငျးလိုကျတာ ညီမလေးရယျ ဟငျ့ ပွှတျ ပွှတျ သက်စုက ကနြေျာ့လီးဒဈကို တရှရှ စုပျလိုကျ လြှာလေးနဲ့ ကစားပေးလိုကျ စုပျနတေယျ။ မကျြလုံးလေး မှိတ်လို့ ခံစားရငျးပေါ့။ ကိုသီဟက သဲဆံပငျကို ဆှဲပွီး သဲ လီးစုပျပေးနတောကို ခံစားနတေယျ။ စုပျ ညီမ စုပျ အု အု စုပျကောငျးလား ညီမ ကောငျးတယျ ကိုကွီးရယျ ကနြျော လရပေနျးထှကျခကျြလာတယျ။ ဒါနဲ့ ခဏရပျခိုငျးပွီး သဲ အဖုတျသှားဆေးပါလား ဘာလို့လဲ ကို ပွီး ပွောပွမယျ သက်စုက ရခြေိုးခနျးထဲ ဝငိသှားတယျ။ ရသေံကွားနရေတယျ။ ကနြျော သကျစုပွနျအလာကို ရငျတခုနျခုနျနဲ့ စောငျ့နေ တယျ။
ကို လာ သဲ။ အိပ်ချ။ ပကျလကျလှနျထား သက်စု အိပျရာပျေါ ပကျလကျလှဲတယျ။ အလိုကျသငျ့လေး ပေါငျနှဈဖကျကို ကားပေး တယျ။ အမှေးထူထူလေးနဲ့ ဖောငျးမို့ခုံးထဈနတေဲ့ သက်စုရဲ့ စောကျဖုတျကွီးက လှတပတလေး။ မကျြလုံးမှိတျ ညီမ။ ကိုကွီး ညီမ စောကျပတျကို မှုတျပေးခငျြတယျ အို ကနြျော သူ့ပေါငျကွားထဲ နရောယူပွီး အဖုတျလေးကို မကျြနှာအပျတယျ။ အဟငျ့ဟငျ့ ခု သဲအကို ကိုသီဟ သဲေားကျဖုတျကို စုပျပေးတော့မယျ အ လြှာဖြားလေးနဲ့ အကှဲဖတျလေးကို ထိုးဆှလိုကျတယျ။ ရှီး ပလပျ ပလပျ ပွှတျ ကိုကွီးရယျ ခု လြှကျနတော ကိုသီဟထှနျးနျော ဟငျ့ အစလေ့ေးကို ဆှဲစုပျငုံခဲလိုကျတယျ။ အား အဟငျ့ဟငျ့ အ အ အ မိနဈအတျောကွာ ကနြျော လြှာစှမျးပွလိုကျတာ သက်စု တှနျ့တှနျ့လူး အျောဟဈညညျးညူနတေော့တာပဲ။ နှုတျကလညျး ကို ကွီးရယျ ကိုသီဟရယျ လကျြပါ ဆိုပွီး တမျးတလို့။ အတနျကွာတော့မှ ကနြျော အမှုတျရပျပွီး နရောယူတယျ။ လီးလညျး အစှမျးကုနျတောငျနပွေီ။ သက်စု အဖုတျဝလေးကို လီးထိပျတလေို့ကျတယျ။ တငျပါးကိုကိုငျ လီးဖိသှငျးရငျး ခု ကိုသီဟ ညီမကို လိုး တော့မယျနျော လိုးပါ လိုးပေးပါ ကိုကွီးသီဟရယျ။ သက်စုကို ကိုကွီးလီးကွီးနဲ့ လိုးပေးပါ ကတြေျာ့ လီးခြောငျးပူပူကွီး သကျစု အဖုတျထဲ တဆုံးထိုးဖိသှငျးလိုကျတယျ။ စီးပိုငျကပျြထုပျနဆေဲ အဖုတျလေးရဲ့ အတှငျးသားတှကေ ကနြေျာ့လီးကို ဆှဲညှဈတယျ။ ကြ နျော ပွနျဆှဲထုတျပွီးမှ ဆတ်ခနဲ ဆောကျသှငျးတယျ။
ကောငျးလိုကျတာ။ ခါတိုငျးထကျ ပိုကောငျးတယျ ကိုရယျ ကိုသီဟရဲ့ လီးအသဈကွီးနဲ့ကိုး။ ကွိုကျလား ကွိုကျတယျ။ အ။ အဟငျ့ ကုနျးပေးပါလား ဟုတျ သက်စု ဒူးလေးထောကျပွီး တငျလေးကို ပငျ့ကော့ပေးတယျ။ ထဘီနီလေးကို ကနြျော ဆှဲလှနျတငျလိုကျ တယျ။ ဖွူဝငျးကားစှငျ့နတေဲ့ သကျစုဖငျသားစိုငျ အိစကျစကျကွီးကို ဆှဲညှဈဖွဲလိုကျတယျ။ ကိုသီဟက ကုနျးထားတဲ့ ညီမကို နောကျကနေ လိုးမယျတဲ့ အငျ့ ဟငျ့ဟငျ့ လိုးပါ လိုးပေးပါ သက်စု အရမျးဖီလျးဖွဈနပွေီ။ ကနြျောလညျး ပိုကောငျးနတေယျ။ ကုနျး ထားတဲ့ ဖငျသားဖှေးဖှေးနှဈဖကျအလယျကွားက ပွူအဈနတေဲ့ အဖုတျနီရဲရဲလေး အဝကို လီးဒဈ ထိုးသှငျးရငျး ကိုသီဟ ညီမလေး စောကျဖုတျကို လီးထညျ့ပွီနျော အဟငျ့ တငျစိုငျကို အားယူပွီး ကုနျးလကျြအနအေထား ဆောငျ့လိုးပဈတယျ။
အကိုဝမျးကှဲရဲ့ လီးကွီးနဲ့ လိုးနတေယျလို့ ခံစားအလိုးခံနတေဲ့ သက်စု အရသာမြိုးစုံ ခံစားနရေမှာ အမှနျပါပဲ။ ကနြျောနဲ့ သက်စု အဲဒီည က အခြီမနညျး လိုးဖွဈကွတယျ။ သူ့အကိုဝမျးကှဲ ကိုသီဟထှနျး ပုံစံနဲ့ လိုးပေးတာကို သက်စု အတျောခံစားလို့ကောငျးတယျထငျရဲ့။ ခါတိုငျး လိုးတုနျးက အလွန်ဆုံးမှ ၃ခြီပဲ။ ဒီတဈခါ ငါးခြီလောကျ နှဈယောကျစလုံး အပွီးလိုးလိုကျဖွဈတယျ။ ကနြျောတို့စုံတှဲက အပေးအယူမြှတယျ။ အပွငျမှာ မတှဖွေ့ဈရငျလညျး ညအိပျခါနီးဖွဈဖွဈ နဘေ့ကျ လူရှငျးရငျဖွဈဖွဈ ဖုနျးပွောရငျး ဖုနျးပျေါကလိုး လုပျကွတယျ။ ပထမတော့ ကြှနျတျောက လိုး၊ သူက ခံပေါ့။ အဲဒီညက ကိုသီဟထှနျးအဖွဈ စိတျကူးပွီး လိုးပေးပွီးနောကျပိုငျး သ က်စုက တခွားဘဲတဈပှနေဲ့ ပေးလုပျခိုငျးလေ ပိုဖီးလျလပေဲ။ တစ်ခု ပွောဦးမယျ။ ကနြေျာ့သကျစုလေးက အဖုတျအမှုတျခံရတာကို အသကွေိုကျတာ။ ကနြျော စပေးလိုကျတာလေ။ တဈနေ့ ဖုနျး လိုးရငျး ပါးစပျနဲ့ ပွောလိုးကွရငျး သက်စုက တခွားယောကျြားတ ယောကျကို ပိုကျဆံပေးငှားပွီး မှုတျခိုငျးလို့ရရငျ ကောငျးမှာပဲနျော တဲ့။
ကနြျောက တဈနနေ့ေ့ ဖနျတီးပေးမယျလို့ ပွောထားလိုကျတယျ။ လကျတှမေ့တော့ ဘယ်လွယ်မလဲ။ တဒင်ျဂကောငျးပမေယျ့ နောကျပိုငျး အရှုပျအရှငျးတှလေညျး ရှိနိုငျတယျလေ။ ဘာဖွဈဖွဈ တနမှေ့ာ သဲကို ရအောငျဖနျတီးပေးမယျလို့တော့ ကတိပေးထားလိုကျတာပဲ။ နောကျတဈပတျကြျောလောကျ ကနြျောတို့ မလိုးဖွဈဘူး။ ဖုနျးထဲ စကားနဲ့ လိုးကွရုံပဲ ရှိတယျ။ လိုးကွတိုငျးလညျး ကိုသီဟထှနျးလီး ကွီးနဲ့ ဇာတျလမျးဆငျ ပေးခံတာပဲ။ တဈနေ့ သက်စု ကနြေျာ့ကို ပွနျပွောပွတယျ။ ဒီလို သကျစုရေ၊ ညီမလေး။ ဒျေါဒျေါတို့ မရှိကွ ဘူးလား အသံနဲ့အတူ အိမျထဲဝငျလာတာက ကိုသီဟထှနျး။ ကိုသီဟထှနျးကို မွငျတာနဲ့ သက်စု ကွကျသီးဥလေးတှေ ထသှားမိ တယျ။ ကိုနဲ့ လုပျကွတုနျးက ကိုသီဟထှနျးကို မှနျးစိတျကူးခဲ့တာတှေ ပွနျသတိရပွီး သကျစုရငျတုနျသှားတယျ။ အဖုတျလေးလညျး ဆဈခနဲဖွဈသှားသလိုလို။ ကိုသီဟထှနျးက အိမျထဲဝငျလာတယျ။ သကျစုထိုငျနတေဲ့ ဆိုဖာမှာ ဘေးခငျြးကပျ ဝငျထိုငျတယျ။ အသား ခငျြးမထိပမေယျ့ သက်စု ရငျတဒိတျဒိတျခုနျသလိုပဲ။ လီးကွီး ကိုသီဟရဲ့ လီးကွီး။ အို ရှက်လိုက်တာ။ သက်စု အလိုလိုနရေငျး ရှိ့တို့ရှနျ့တနျ့ ဖွဈနမေိတယျ။ ဒီနေ့ ဂြူတီမရှိဘူးလား သက်စု မရှိဘူး ကိုကွီး။ မနကျဖွနျမှ သွားရမှာ။ ဒီနေ့ Off ရကျ အငျး။ ငါလညျး ခု ပငျြးတာ နဲ့ လာလညျတာ ကိုသီဟနဲ့ ဟိုအကွောငျးဒီအကွောငျး ပွောရငျး သက်စု နရေခကျလာတာနဲ့ အခနျးထဲ ဝငျခဲ့တယျ။ အိမျမှာ အမရှေိ နတေော့ အမထှေကျလာပွီး ကိုသီဟနဲ့ စကားပွောနကွေတယျ။
သက်စု အခနျးထဲဝငျ တံခါးပိတျပွီး အိပျရာထဲလှဲရငျး အတှေးတှေ အစုံပါပဲ။ ပေါငျကွားထဲ လကျထညျ့ပွီး အဖုတျနှေးနှေးလေးကို အုပျကိုငျပှတျသပျနမေိတယျ။ စိတျတှလေညျး အတျောလှုပျရှားလို့။ ကိုသီဟရဲ့ လီးကွီးနဲ့သာ အလိုးခံရရငျဆိုတဲ့ အတှေးတှကေ သကျစုရငျကို ဗလောငျဆူလာစတေယျလေ။ သမီးရေ။ သက်စု .. မမေေ အပွငျခဏသှားဖို့ အပွငျထှကျလာဦးနျော ဟုတျ မမေေ အတှေးတှေ ပွတျသှားတယျ။ သကျပွငျးလေးခပြွီး အခနျးပွငျထှကျတော့ သီဟတော့ ပငျြးပငျြးနဲ့ အိပျပြျောသှားပွီ။ ညက မအိပ်ထား ရလို့တဲ့။ အိပျပါစေ မမေထှေကျသှားတော့ ခွံတံခါးဆငျးပိတျလိုကျတယျ။ ပွနျတကျလာတော့ ဆိုဖာပျေါ ပကျလကျအိပျနတေဲ့ ကိုသီ ဟကို ရပျကွညျ့နမေိတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ကိုသီဟရဲ့ ပုဆိုးကွားက ဖုဖောငျးဖောငျး နရောကိုပေါ့။ သကျစုကွညျ့ရငျး ရငျတုနျလိုကျ တာ။ အနားကပျသှားမိတယျ။ ကိုသီဟကတော့ တခူးခူးနဲ့ ဟောကျတောငျနသေေး။ သက်စု စိတျတှေ စုစညျးမရတော့ဘူး။ စိတျကူးနဲ့ အကွိမျကွိမျ အလိုးခံလာရတဲ့ ကိုသီဟရဲ့ လီးကွီး။ ဒီနရောမှာပါလား။ သက်စု လကျလေးတဈဖကျဟာ ကိုသီဟပေါငျကွားက ဖု ဖောငျးနတေဲ့ နရောကို အသာတို့ထိ စမျးကွညျ့လိုကျတယျ။
အို လကျတှေ တဆတ်ဆတ်တုန်လို့။ ပြော့အိနှေးထှေးနတေဲ့ လိငျခြောငျးက သက်စုအဖုတ်ကို ယားယံလာစတေယျ။ အတှငျးခံ ဝတျမထား တာမို့ လိငျတံပြော့ပြော့ကို ဖွဖွလေး စမျးကိုငျထားရငျး တံတှေးမြိုခနြရေတယျ။ လက်တစ်ဖက်က အဖုတ်ကို ပှတျနမေိရငျး။ လကျကလေး နဲ့ အသာဆုပျထားခြိနျမှာ ပြော့ခှနေတေဲ့ လိငျတံဟာ တဖွညျးဖွညျး မတျတောငျလာတယျ။ ဟငျ့ အကွီးကွီးပဲ။ ကို့ဟာထကျ ပိုကွီး တယျ သက်စု ရငျထဲ လှိုငျးထနျနတေယျ။ ပိုဆိုးတာက အကိုဖွဈသူရဲ့ လီးကွီးကို ကိုငျထားရတာမို့ ရငျခုနျမှုက မွနျနရေောပဲ။ ကိုသီ ဟကတော့ အိပျမောကနြရှောတာ။ သက်စု ဖီးလျတကျပွီး လီးကို ကိုငျထားတာတောငျ မသိဘူး။ အိပ်မက်လိုလို ဖွဈနသေလားပဲ။
တောငျမတျနတေဲ့ လီးပူပူကွီးကို သက်စု အတနျကွာ ဆုပျကိုငျထားမိ တယျ။ အရမျးလညျး မညှဈရဲဘူး။ နိုးသှားရငျ ကိုယျကြိုးနညျး မှာ။ အသာဖွဖွလေးပဲ အရသာခံရငျးက ခေါငျးလေးကို ငုံ့ခလြိုကျတယျ။ ဖူးအဈနတေဲ့ ဒစ်ထိပ်ကို နှုတျခမျးနဲ့ တဝနမျးရှိုကျပဈလိုကျ တယျ။ လီးနံ့က တမြိုးပဲ။ သက်စု သကျပွငျးခပြွီး လီးကို လကျထဲက လှတျလိုကျတယျ။ ဒါတောငျ ပုဆိုးပျေါ ထောငျပွီး မတျနတေုနျး။ မမွငျရပမေယျ့ ပုဆိုးပျေါက ဖောကျထှကျနတေဲ့ လီးမတျမတျကွီးကို သက်စု ငေးကွညျ့ရငျး အဖုတျလေးကို ပှတျနမေိတယျ။ ပွီး တော့ ဘယ်လိုမှ မခံစားနိုငျတော့တဲ့အဆုံး ကို့ဆီ ဖုနျးချေါလိုကျတော့တယျ။ ကို ကိုအားလား သဲ အရမျးဆာနပွေီကှယျ။ ဖုနျးနဲ့ပွော ရငျး လိုးပေးပါတော့နျော သဲ ဘယျလိုဖွဈတာလဲ။ နခေ့ငျးကွီး အိမျမှာ လူမရှိတုနျး ဒီလိုကိုရေ။ သဲ အရမျး ခံစားနရေပွီ။ မွနျမွနျ လိုးပေးပါနျော ကို့ရဲ့ ခပျကွမျးကွမျး လိငကြိဈ စကားလုံးတှကေို ခံစားနားဆငျရငျး ကိုသီဟလီးကွီးကို မှနျးဆလို့ အိပျရာပျေါ ပကျလကျကလေးနဲ့ သကျစုတဈယောကျ လကျခြောငျးလေးကို ကစားရငျး အာသာဖွတေော့တယျ။
နူးညံ့စိုစှတျနတေဲ့ စောကျဖုတျနှုတျခမျးသား ပနျးလှာနုလေးကို လကျခြောငျးနဲ့ ပွတျသပ်ကစား၊ အစေ့ရဲရဲ မာမာလေးကို ပှတျခြေ၊ တှငျး ပေါကျထဲ လကျခလယျလေး အသှငျးအထုတျလုပျရငျး ကိုကွီးသီဟရဲ့ လီးမာမာကွီး ငါ့စောကျဖုတျထဲ ထိုးထညျ့လို့ အဟငျ့ဟငျ့၊ ငါ့ ကို နမျးရှုံ့ပေး၊ ငါ့နို့လေးတှကေို ကိုကွီးသီဟလကျနဲ့ ဆှဲညှဈ၊ အို ငါ့ကို ပေါငျလေးကားခိုငျးပွီး အဖုတျလေးထဲ သူ့လီးကွီးနဲ့ အားကုနျ ဆောငျ့ပေးနေ အဟငျ့ ကိုကွီးသီဟရယျ၊ သက်စုကို အရမျးလိုးပေးပါ၊ မညှာပါနဲ့၊ အဆုံးထိ ကွမျးကွမျးဆောငျ့လိုးပေးပါနျော စိတ်ကူး ထဲ ကိုကွီးသီဟရဲ့ လိုးဆောငျ့ခကျြတှကေို မွငျယောငျတှေးတော အရသာခံ မှိနျးမောရငျး . သက်စု ပွောပွသော ဇာတျလမျးကို နားထောငျရငျး ကနြေျာ့လီး အစှမျးကုနျ တောငျမတျလာတယျ။ သက်စုကို ပွတော့ သက်စုက လကျကလေးနဲ့ ဖှဖှကိုငျဆုပျပေးတယျ။ အဲဒီနကေ့ ဒီလိုလေး သဲကိုငျထားတာပေါ့ ကိုရယျ။ ကိုကွီးသီဟ လီးကွီးလေ။ သဲ စကိုငျတုနျးက ပြော့ပြော့သေးသေးလေး။ ကိုငျ ထားရငျးက တောငျတကျလာတာ ကို့ဟာထကျ ပိုရှညျတယျ။ ပိုလညျး အလုံးကွီးတယျ၊ သဲ အဖုတျလေး ကဉျြခနဲပဲကှယျ အပျေါက နေ တကျခှထိုငျပွီး ကိုယျ့ဘာသာ အဖုတျထဲ ထိုးထညျ့ လိုးလိုကျပေါ့ သဲရာ ခံခငျြတာ ကိုရယျ။ မဖွဈသငျ့လို့သာ သဲ လိုခငျြနပွေီ လား သက်စု ခေါငျးလေးညိတျတယျ။ ကနြေျာ့ပုခုံးပျေါ ခေါငျးမှီတယျ။ သက်စု မကျြလုံးတှေ ရီဝနေတေယျ။ ကြှနျနျော သက်စုကို ရငျခှငျ ထဲ ဆှဲသှငျးလိုကျပွီးတော့ နှုတျခမျးလေးကို ပွှတျခနဲ ဆှဲစုပျငုံပဈလိုကျတယျ။
အငျ့ ဟငျ့ ခဈြတယျကှယျ လိုးကွစို့နျော သဲလေး ဟုတျ သက်စုက ထုံးစံအတိုငျး ခေါငျးဆောငျးကတျလေးကို ဖွုတျပွီး စားပှဲပျေါ တငျတယျ။ ကနြျောက အကငြ်္ီဖွူလေး အောကျက လုံးခြှနျမို့တငျးနတေဲ့ ရငျသားတဖကျကို ဖှဖှညှဈဆုပျပှတျသပျပေးလိုကျတယျ။ အဟငျ့ သက်စု ကနြေျာ့လီးကို လကျနဲ့ဆုပျပွီး တခကျြနှဈခကျြ ဂှငျးတိုကျပေးတယျ။ အရငျစုပျပေးပါလား သဲ အငျး ကို ကနြျော ကုတငျပျေါ ပကျလကျလှဲတယျ။ ပေါငျကွားက ကောငျက မိုးပျေါမတျလို့။ ချဈသူက ကနြေျာ့ဘေးမှာအသာဝငျထိုငျတယျ။ နှုတျခမျးနီနီ ဖူးဖူးလေးကို နညျးနညျးဟလိုကျပွီး ခေါငျးလေးငုံ့ခလြိုကျတယျ။ စိုစှတျပူနှေးနတေဲ့ နူးညံ့ညံ့နှုတျခမျးအစုံဟာ လိငျတံတလြှောကျ အရသာအပွညျ့ ပေးစှမျးတယျ။ အာငှနှေ့ေးနှေးလေးနဲ့အတူ ထိတှရှေ့လြေ့ားနတေဲ့ နှုတျခမျးသား။ လိငျခြောငျးကို ရဈပတျလိုကျပွီး အာခေါငျထဲထိ ဆှဲငုံစူပျယူလိုကျတဲ့ အပွုစု။ တခကျြတခကျြ ဒစ်ကို ဖွဲခပြွီး ဒဈထိပျခေါငျးအောကျခွကေ ရသာဖုလေးတှကေို ထိထိ မိမိထိုးဆှပှတျတိုကျပေးတဲ့ သက်စုရဲ့ လြှာဖြားလေးကွောငျ့ ကနြျော ကွှတကျအောငျ အရသာခံစားရတယျ။
ပွှတျ ပွှတျ ရှီး ကောငျးလားဟငျ ကို စုပျပေးရငျးက ပါးစပ်ကနေ လီးကို ခနခြှတျပွီး ကနြေျာ့ကို သကျစုမေးတယျ။ ဘာနဲ့မှ မလဲနိုငျ ဘူး သကျစုလေးရာ။ သိပျကောငျးတယျ။ ကို့အသဲလေးက သိပျအပွုစုကောငျး သက်စုက ခဈြစဖှယျမကျြစောငျးလေးထိုးရငျး ဒုတ်ကို ပွနျဆုပျကိုငျလို့ နှုတျခမျးလေးနဲ့ ပွနျငုံတယျ။ ပါးစပျထဲ ပွီးခငျြတယျ သဲရယျ ကြှနျတျော သကျစုပါးစပျထဲ ပွီးပဈလိုကျခငျြတာမို့ တောငျးဆိုတယျ။ ခဏခဏစုပျပေးဖူးပမေဲ့ တခါမှ ပါးစပျထဲ မပွီးဖူးဘူး။ ဟာကွာ ကိုကလညျး လုပျပါ သဲရယျ ကိုပွီးလိုကျခငျြလို့ ကိုနျော။ မလုပျနဲ့ကှာ။ တမြိုးကွီး သဲအတှကျ အားရှိပါတယ်ကွ။ နျော ဟငျ့အငျးလို့။ ပွီးခါနီးပွောလေ ကိုရာ။ အပွငျမှာပဲ ထုတျ လိုကျပါနျော မရဘူး။ ဒီတခါတော့ ပေးပွီးကှာ။ နျော သဲလေး ဟငျ့အငျးလို့ ပွောရငျး ဆကျစုပျတယျ။ ကနြျော ရအောငျ စညျးရုံး လိုကျတော့လညျး နောကျဆုံးမှာ ခေါငျးညိတျလကျခံပေးရှာပါတယျ။ ပူနှေးစိုစှတျတဲ့ ချဈသူရဲ့ အစုပျအငုံ။ ဒါတငျမက သူနာပွု ဝတျစုံလေးနဲ့ ဆံထုံးလေးနဲ့ ခပျခြောခြော ချဈသူ Nurse လေးက မကျြလုံးလေးစငျးလို့ ကိုယျ့လီးကို တယုတယစုပျပေးနပေုံကို ကွညျ့လေ ကနြျော အရသာပိုရှိ ပိုကောငျးလာလပေါပဲ။ ဒူးထောကျ ခေါငျးငုံ့စုပျပေးနတောမို့ တငျစိုငျလေးက နောကျကို ကော့ထား ဟနျလေးနဲ့။ ခါးကဉျြကဉျြလေးအောကျက ကော့စှငျ့လုံးဝနျးနတေဲ့ ထဘီနီဖုံး တငျသားပွညျ့ပွညျ့ကို တပျမကျစှာကွညျ့ရငျး ဆန်ဒတှေ အတိုငျးမဲ့။
ခဈြသူ့ခေါငျးလေးကို ထိနျးကိုငျထားပေးလိုကျတယျ။ ဆံထုံးလေးကို ဘယျလကျနဲ့ဆုပျပွီး အားယူလိုကျတယျ။ အာခေါငျထဲထိ ဒဈ ထိပျဝငျအောငျ ဖိသှငျးလိုကျတော့ သက်စု အွတ်ခနဲ ဖွဈသှားရှာရဲ့။ လှိုငျထနျတဲ့ ရငျခုနျနှုနျး၊ တဆဈဆဈ ပွေးလှားနတေဲ့ ဆဲလျတှေ၊ ရုနျးကွှလာတဲ့ ရမ်မကျ၊ တဒုတျဒုတျ ခုနျနတေဲ့ သှေးကွောတှကေ တဆငျ့၊ သူနာပွုယူနီဖောငျးလေးနဲ့ ချဈသူရဲ့ လီးကို အရသာခံ စုပျ ပေးနတေဲ့ သက်စုကို ကနြျော ပိုခဈြမွတျနိးမိတယျ။ နောကျဆုံးတော့ ပူနှေးတဲ့ သုတျရညျပွဈတှဟော လိငျတံထိပျကနေ သကျစု ပါးစပျထဲ ဒလဟော ပနျးထှကျကုနျတော့တယျ။ ကနြျော သကျစုပါးစပျလေးထဲက လီးကြှတျထှကျမသှားအောငျ မကျြနှာလေးကို ထိနျးကိုငျထားတယျ။ လရေတွေ တစကျမကနျြအောငျ ညှဈထုတျပနျးထုတျလိုကျပွီးတော့မှ ပါးစပျထဲကနေ လီးကို ခြှတျလိုကျ တယျ။ မြိုခလြိုကျလား သဲ “ ဟှနျ့ အငျးပေါ့လို့ အရသာ ဘယျလိုလဲ တမြိုးကွီး ဘယျလိုမှနျး မသိဘူး ခဈြတယျကှာ ကိုရယျ။ ခဈြလှနျးလို့ ကို့အလိုလိုကျခဲ့တာပါ သက်စုက ပွောရငျး ကနြေျာ့ဘေး ဝငျလှဲအိပျတယျ။ လကျမောငျးပျေါ ခေါငျးလေးမှီလို့ လကျ ကလေးနဲ့ ကြှနျတေျာ့ကို သိုငျးဖကျထားပေးတယျ။
ကနြျောတို့ ခဈြသူနှဈဦး စကားပွောဖွဈတယျ။ ပွောနရေငျးက ကနြေျာ့လကျဟာ သကျစုဖငျသားအိအိတှကေို တရစပျ ဆုပျနယျပှတျ သပျပေးနတေယျ။ ထဘီနီလေးအောကျက အတှငျးခံကွိုးလေးကို စမျးကိုငျ ရငျး တဖွညျးဖွညျးခငျြး အတှငျးခံကို ခြှတျယူတယျ။ သကျစုလညျး ကူခြှတျပေးတယျ။ နို့တှကေို နယျဖတျဆုပျညှဈတယျ။ အတှငျးခံမရှိတော့တဲ့ အောကျပိုငျးထဲ ထဘီကွား လကျထညျ့ ပွီး အတှငျးပိုငျး အသားစိုငျတှေ အနှံ့ကို ခပျရှရှလေး လြှောကျပှတျသပျနတေော့ သက်စု ညညျးသံလေး ထှကျလာတယျ။ ပေါကျ တှငျးသားလေးတှဆေီ ပုရှကျဆိတျပွေးသလို လြှောကျကစားပေးတော့ ချဈသူ ဘယျနနေိုငျမလဲ။ စောကျဖုတျလေးကို အသာစမျး လိုကျမိခြိနျမှာတော့ တှငျးပေါကျဝလေးမှာ အရညျတှေ စိုစှတျနပွေီ။ ခဈြတယျ ကို အဟငျ့ဟငျ့ သဲရယျ အ ထဘီလေးကို ကြ နျော ခါးအထိ အသာ ပငျ့တငျလိုကျတယျ။ မကျြနှာခငျြးဆိုငျပဲ ဆှဲဖကျပွီး ပေါကျတဈဖကျကို အပျေါ မတငျလိုကျတယျ။ အို့ ကို ပွနျ မတျနပွေီဖွဈတဲ့ လီးခြောငျးကို ခပျဟဟဖွဈနတေဲ့ အဖုတျဝလေးထဲ ပငျ့ထိုးထညျ့လိုကျတယျ။ အှနျ့ ဖွညျးဖွညျး ကို သက်စု အဖုတျ လေးဟာလညျး အရညျရှဲနပွေီမို့ သိပျခကျခကျခဲခဲ မထညျ့ရတော့ဘူး။ ခပျကွပျကွပျပမေဲ့ စးစေးပိုငျနူးညံ့နတေဲ့ စောကျဖုတျတှငျးထဲ ကနြေျာ့လီး တဆုံး တိုးဝငျသှားတယျ။
ကြှတျကြှတျ ထိတယ်ကိုရာ ကနြျော ပေါငျလေးကို မကိုငျအားယူပွီး ပငျ့ထိုး လိုးဆောငျ့ပေးလိုကျတယျ။ အို့ အို ဟငျ့ဟငျ့ ပွှတျ ပွှတျ ရှီး အ နို့စို့ပေးပါဦး ကိုရယျ ဘျောလီခြိတျလေး ဖွုတျပေးတယျ။ အကငြ်္ီနှိပျသီးတှေ တထောကျထောကျ။ ရှဝေါရောငျ ဝငျး စကျအိဖှေးနတေဲ့ ရငျသားမို့လုံးလုံးလေးကို တဖကျခငျြးစီ ငုံတယျ။ စုပျတယျ။ လြာလေးနဲ့ ကစားပေးတယျ။ အောကျကနလေညျး ထိုးဆွ လိုးညှောငငျ့ပေးနမှေု မလဈဟာအောငျ အာရုံစိုကျထားတယျ။ သက်စုရဲ့ တဟငျ့ဟငျ့ ညညျးသံလေးရယျ အဖုတျထဲ လီး တိုးဝငျတိုးထှကျ အသံတှရေယျ တဖတျဖတျ တပွှတျပွှတျနဲ့ပဲ။ အဲဒီအခြိနျ ကနြျော စိတ်တစ်ခု ဝငျလာတယျ။ သဲ ဟငျ ခုနေ ကိုသီ ဟ ဘေးမှာရှိနရေငျ ဘယျလိုဖွဈမလဲ အာ ရှကျစရာကွီး ဘာလို့ ရှကျရမလဲ သဲရဲ့။ ကိုသီဟက ဘေးမှာ ထိုငျကွညျ့ရငျး ဂှငျးထုခငျြ ထုပစပေေါ့ ကိုရာ ကဲ ကြှနျတျော အားနညျးနညျးထညျ့ပွီး ပငျ့ဆောကျလိုးပေးလိုကျတယျ။ အဟငျ့ ကြှတျကြှတျ အ အ ကောငျးတယျကိုရာ သက်စု ပေါငျတံလေးကို ပိုဆှဲမတငျလိုကျတယျ။ ဖောငျးမို့နတေဲ့ အရညျရှဲရှဲ စောကျဖုတျဟာ ပိုပွဲဟသှားပွီး ကနြေျာ့လီးအဝငျအထှကျ ပိုခြောမှသှေ့ားတယျ။
တဖွောငျးဖွောငျး ဆောကျ့လိုးပေးနရေငျး သဲ။ ကိုသီဟက ကွညျ့ရုံနဲ့ အားမရတော့ဘူးတဲ့ ဟငျ့ ကိုရယျ။ သူက ဘာလုပျနိုငျမှာမို့ လဲ။ သဲအဖုတ်ကို ကိုလိုးနတောလေ။ သဲအဖုတျထဲ ကို့လီးကွီး ဝငျနတောလေ ကိုရယျ .. အ စောကျဖုတျထဲ ကို့လီးသှငျးနပေမေဲ့ ကိုသီ ဟလညျး သဲကို လိုးလို့ရပါတယျ ကိုရာ ဟော သူ သဲနောကျဘကျမှာ ဝငျလှဲအိပျခလြိုကျပွီ အဟငျ့ဟငျ့ သက်စု နှုတျခမျးလေး မ ပိတျနိုငျဘဲ တအအ တအငျ့အငျ့ ညညျးညူနတေယျ။ ကိုသီဟက သဲနောကျကနေ ခါးကို ဖကျတယျ အို ပွီးတော့လေ သဲကို ကိုနဲ့ အတူ ကိုသီဟ လိုးပေးတော့မှာ အ ဘယျလို ဘယျလိုလဲကှာ ဒီလို သဲ ကြှနျတျော သကျစုဖငျသားစိုငျကို ပငျ့ဖွဲလိုကျတယျ။ ပွီး တော့ တံတှေးရှဲအောငျ ဆွတ်ထားတဲ့ လကျခလယျလေးကို သက်စုရဲ့ ခရပှေငျ့လေးမှာ ပှတျသုတျပေးရငျး သဲရဲ့ နောကျပေါကျလေးကို ကိုသီဟ လိုးမှာလေ။ အခု ကိုသီဟက သူ့လီးကွီးကို သက်စု နောကျပေါကျဝမှာ တလေို့ကျပွီ အား အဟငျ့ဟငျ့ ကိုရေ တမြိုးကွီး ကှာ လကျနဲ့ အပွောသာ လှုပျရှားတယျ မထငျနဲ့။ စောကျဖုတျကို လိုးပေးနတေဲ့ လီးအသှငျးအထုတျလညျး အရှိနျမပကျြစဘေူး။ လ က်ခလယ်ကို တံတှေးပွနျဆှတျ့ပီး နောကျပေါကျဝလေးကို ဖွညျးဖွညျးခငျြး ဖိသှငျးလိုကျတယျ။
အမလေး ရှီး ကို . ကို . သဲ အ သက်စု တကိုယ်လုံး တုနျနတေယျ။ လကျတှကေ ကနြေျာ့ကို ကုတျခွဈတယျ။ ကိုသီဟ လီးကွီး သဲ နောကျပေါကျထဲ တိုးဝငျလာပွီ ပွောရငျး လကျတဆဈ ဝငျအောငျ မှနျမှနျသှငျးလိုကျတယျ။ ပွောသာပွောတာပါ။ လကျတောငျ မနညျးထညျ့ရတယျ။ လကျတဆဈဝငျသှားခြိနျမှာ သက်စု ကတုနျကရငျဖွဈနရှောပွီ။ စိတျအတျောလှုပျရှားနမှေနျး ခနျ့မှနျးမတြယျ။ ကနြျောလညျး ဒီလို ပွောလုပျနခြေိနျ ပိုအရသာ တှနေ့တောလေ။ စအိုကွှကျသားတှကေ ကနြေျာ့ လကျခြောငျးကို ဆုပျယူဆှဲညှဈနေ တာ။ ကွညျ့စမျး သူ့ညီမလေးကို ကိုသီဟ လိုးနပွေီ။ စောကျဖုတျကိုတောငျမဟုတျဘူး။ ဖငျကို လိုးနတော အီးဟီး ကိုရေ၊ အဟငျ့ လကျနှဈဆဈလောကျ ဝငျတဲ့အထိ ထိုးသှငျးပွီးခြိနျမှာ သက်စုဟာ အသကျကိုတောငျ မနညျးရှူနရေတော့တယျ။ ခံစားမှု အသဈအဆနျးကွောငျ့ စိတျလှုပျရှားမှုဟာ အရှိနျမွငျ့လှနျးနမေယျ ထငျပါရဲ့။ ကြှတျကြှတျ ကိုလညျး ဆောကျ့ကှာ အငျးပါ ကြှနျတျော သကျစုစောကျဖုတျလေးကို တဖွောငျးဖွောငျး ဆောကျတယျ။ ဆောကျပေးရငျးကမှ နောကျပေါကျထဲ ထညျ့ထားတဲ့ လ က်ခလယ်ကို ခပျဖွညျးဖွညျး မှနျမှနိလေး အသှငျးအထုတျ လုပျပေးတယျ။ စအိုအတှငျးသားတှကေို ပှတျတိုကျထိုးဆှပေးတယျ။ ကောငျးလိုကျတာ ကိုရယျ။ ခဈြတယျ။ လိုးပါ အဟငျ့ဟငျ့ သဲကို လိုးပါ ကဲ ကဲ ရှကေ့ ကို့လီးနဲ့ သဲစောကျဖုတျကို လိုးနတေယျ။ နောကျကလညျး ကိုသီဟလီးက သဲဖငျပေါကျကို လိုးနတေယျနျော
အ အ အ သဲ ကွိုကျလား ကွိုကျတယျ ကွိုကျတယျ ကို။ သဲ အရမျး ကောငျးနတေယျ။ စိတျလှုပျရှားတာ အရမိးပဲ။ ဟငျ့ စောကျ ဖုတျနုနုလေးကို တရစပ်ထိုးဆွ လိုးနှကျပေးနတေဲ့ ကနြေျာ့လီးအရသာကော စအိုပေါကျလေးထဲ ထိုးသှငျးဆှနှိုကျပေးနတေဲ့ လကျခြောငျးရဲ့ စိတျကူးယဉျခံစားမှုကွောငျ့ပါ ဆိုတော့ သက်စုခမျာ ကာမအရသာ အလွိးခံရတဲ့ အရသာကို ရသစုံ ခံစားနရေမဟျထငျတယျ။ စကားတောငျ မပွောနိုငျတော့ဘဲ ကနြျော ပွုစုသမြှ အရသာခံစားနတေဲ့ ခဈြသူလေးကို ကနြျော အားရပါးရ လိုးရငျး လ ရထှေကျခငျြလာတယျ။ သဲ ကုနျးပေးကှာ ဟငျ့ သက်စု အလိုကျသငျ့လေး ကုနျးပေးတယျ။ ကနြျော ဆကျမလိုးခငျ သခြောကွညျ့ သေးတယျ။ ကုတငျပျေါမှာ ယူနီဖောငျးလေးနဲ့ ထဘီနီလေး လှနျတငျပွီး တငျသားတှကေို စှငျ့နအေောငျ ကော့ပေးထားတဲ့ သူနာပွု ဆရာမလေးကို ကနြျော ပိုငျထားရတာ ဘယျလောကျ ကံကောငျးလိုကျသလဲ။ ရုပျရညျလညျး ပွောစရာမရှိ၊ အပွုအစု အယုအယ လညျး ကောငျး၊ စိတ်တူကိုယ်တူ အလိုးခံတတျတဲ့ သက်စုကို ကနြျော သိပ်ချစ်တာပါပဲ။
ကနြျော နရောယူလိုကျတယျ။ ခကျြခငျြး မလိုးသေးဘဲ သက်စုရဲ့ တငျနှဈမှာကွားက ခရပှေငျ့လေးကို ကနြျော ငေးနမေိတယျ။ ကွညျ့ ရငျး စိတျမထိနျးနိုငျတော့ဘူး။ ခရပှေငျ့လေးကို လကျထိပျနဲ့ အသာပှတျလိုကျတယျ။ ပွီးတော့ ဖငျသားနှဈဖကျကို လကျနဲ့ ဆှဲဖွဲပွီး ကနြေျာ့ မကျြနှာဟာ အဲဒီဖငျသား ဖှေးဖှေးနှဈဖကျအလယျကို အပျသှားတယျ။ အို ကို ဘာလုပျမလို့လဲ သကျလေးကို အရသာသဈ ပေးမလို့ ငွိမျငွိမျနေ စူတူတူ ခရပှေငျ့လေးကို ကနြျော လြှာနဲ့ သပျတငျလိုကျတယျ။ အား ကို ပွှတျ ပွှတျ အီး ကိုရေ ဘယျလိုလုပျ နတောလဲ ကနြျော ပွနျမပွောတော့ဘဲ ချဈသူရဲ့ ခရပှေငျ့လေးကို ရသလောကျဖွဲပွီး လြှာထိပျကို ထိုးထိုးထညျ့တယျ။ အဝလေးကို လြှာနဲ့ ပတျမှကေစားတယျ။ ရှီး သဲကို သတျနတောလား ကိုရယျ။ အ အ နမေရတော့ဘူးကို။ အဟငျ့ဟငျ့ သဲ ဒူးတှေ ခှကေတြော့ မယျ အား တရစပျပဲ ကနြေျာ့လြှာကို အလုပျပေးနမေိတယျ။ တျောပါတော့ ကိုရယျ တျောပါတော့ အ အ ပလပျ ပလပျွပွတျ အား အဟငျ့ဟငျ့ဟငျ့ ခရပှေငျ့လေး တံတှေးတှေ စိုစိုရှဲလို့။ ကနြျော ဒူးထောကျလိုကျတယျ။ ပွီးတော့ လီးပျေါ တံတှေးတှေ ရှဲနေ အောငျ သုတျခလြိုကျတယျ။ ပွီးတာနဲ့ ဖငျသားကို အားပါးရ ဆုပျကိုငျ ဖွဲလိုကျရငျး ကော့ထား သဲ။ ရသလောကျ ကော့ထား သက်စု က ပွောတဲ့အတိုငျး ပိုကော့ပေးတယျ။
ကနြျော တယမျးယမျးနဲ့ အရညျတရှဲရှဲ လီးခြောငျးကို သက်စု ခရပှေငျ့အဝမှာ တလေို့ကျတယျ။ ကို အပေါကျလှဲနေ အငျ့ အို ကနြေျာ့ စိတျ သိပျထနျနပွေီ။ လီးဒစ်ကို အဝမှာ အသာတပွေီ့းတာနဲ့ ဖိသှငျးပဈလိုကျတယျ။ လီးမှာရော စအိုမှာပါ တံတှေးတှေ ရှဲရှဲစိုနတော ကွောငျ့ လီးထိပျဟာ လြှောခနဲ ထောငျူခနဲ စအိုပေါကျကဉျြးထဲ တိုးဝငျသှားတယျ။ အား အိ သပေါပွီ ကနြျော သက်စု ဖငျသားကို လကျတဖကျကိုငျ လီးကို ကြှတျမထှကိအောငျ လကျတဖကျထိနျးပွီး ဆကျထိုးသှငျးလိုကျတဟျ။ သက်စု ရုနျးတဟျ။ ကနြျော ဖိ ခြုပျထားတယျ၊။ ကို ပွနျထုတျ သဲ မခံနိုငျဘူး အ အခု လိုးနတော နငျ့ရညျးစား မဟုတ်ဘူး။ ငါ သီဟပဲ သက်စု။ နငျ့ဖငျကို ငါ့လီးကွီး ထညျ့လိုးပေးမယျ ကဲ အား အဟငျ့ဟငျ့ နာတယျ ကဲ ကဲ ကဲ ကနြေျာ့ လီးတံ သကျစုခရပေေါကျထဲ တဝကျကြျော တရစပျ တိုးဝငျ သှားခြိနျမှာ သက်စု တအားအား အျောဟဈတယျ။ ကနြျောလဘျး သိပျမကွမျးပါဘူး။ ကဉျြးကပျြတဲ့ သကျစုဖငျပေါကျလေးဟာ ကြ နေျာ့လီးကို ကွောကျကွောကျနဲ့ ဆှဲညှဈထားတာကိုး။
ငါ့လီးကို ကွိုကျလား သက်စု ဟငျ့ မေးတာ ဖွလေေ ကွိုကျ ကွိုကျတဟျ ။ ဖွညျးဖွညျးနျော ကို သဲနာတဟျ ကို မဟုတ်ဘူး။ နငျ့ အကို ကိုသီဟ နငျ့ကို ဖငျကုနျးခိုငျးပွီး လိုးနတော။ ဖငျလိုးနတော ပွောရငျး ခပျဖွညျးဖွညျး မှနျမှနျ သှငျးလိုကျ ထုတျလိုကျ။ သက်စု ခမျာ အံကွိတျညညျးညူရငျး ကနြေျာ့လီးနဲ့ အလိုးခံနရေတဲ့ ဖငျပါကငျဖှငျ့ခနျးကို သူ့အကို ကိုသီဟ အမှတျနဲ့ ခံစားလို့ အ အ ကွိုကျ လား ကွိုကျတယျ ဟငျ့ဟငျ့ ဖှတျ ဖှတျ ပလှပျ ကနြျော စိတျပိုပွငျးထနျလာတယျ။ ကုနျးနတေဲ့ ကော့စှငျ့စှငျ့ ဖငျသားစိုငျ ဖွူဖှေး ဖှေး ကားကားအစုံကို လကျဝါးနဲ့ ဖွနျးခနဲ ရိုကျလိုကျတယျ။ အ ဖွနျး ဖွနျး ရိုကျလိုကျ လိုးလိုကျနဲ့ လရတှေလေညျး ထိနျးမရတော့ ဘဲ ပနျးထှကျသှားတယျ။ ကနြျော သကျစုအပျေါ ထပျမှီလဲခပြွီး ဖငျပေါကျထဲ လီးကို တဆုံး စိမျထညျ့ထားပွီး လရေတွေကို အကုနျအစငျ ညှဈထုတျပဈလိုကျတယျ။ အတနျကွာထိ လီးကို မခြှတျသေးဘဲ ဖငျထဲ ထိုးစိမျထညျ့ထားရငျး သက်စုကို ဖက်လို့ အမော ဖွနေရေတယျ။ ဆယျမိနဈလောကျ ကွာမှ သက်စုက အမောပွပွေီလား မကျြစောငျးလေး ထိုးပွီး လှညျ့မေးတယျ။ ကနြျော ပါး လေးကို တရှတျရှတျနမျးရငျး ခေါငျးညိတျလိုကျတယျ။ ခြှတျတော့ ဟှနျ့ လီးက ပြော့သှားပွီ။ သကျစုဖငျပေါကျထဲကနေ ပလွတ်ခနဲ ပွနျထှကျလာတယျ။
အတျောဆိုးတယျ ဘယ်လိုလုလဲမသိဘူး အဲလို ဆိုးပေးတာကိုပဲ သကျစုလေး ချစ်တာ မလား။ ခပ်ဆိုးဆိုး လီးနဲ့လိုးပေးတာကို ပိုကွိုကျ တယျမလား” ဘယျသူပွောလဲ ဟောဒီဟာလေးတှေ ပွောတာ ကနြျောက သက်စုရဲ့ အဖုတျနဲ့ ခရေကို လကျနဲ့ ထိကိုငျပွလိုကျ တော့ ဟှနျး သူများကို နှဈယောကျပေါငျးပွီး အရမျးလိုးကွပွီးမှ ဟောဗြာ။ ကို့ခဈြသူလေးကို ချစ်လို့ အရသာစုံ ပေးစှမျးနတောပါကှာ အဲ့လိုကပျြကပျြလုပျ။ တခြားသူ လီးတှကေိုပါ ကွိုကျသှားမိမှာနျော ကွိုကျပေါ့။ ကိုက ဖွညျ့ဆညျးပေးမှာ အပို တကယျ။ တနေ့ ကိုတို့ လကျထပျပွီးလို့ ကိုလိုးလို့ ဝရငျ သဲအဖုတျလေးကို တခွားလီးနဲ့ ပေးခံစားမယျ။ ခုနလို ယောကျြား၂ယောကျ ပူးလိုးတဲ့ ဖီ လျးလေးလညျး ပေးမယျ မိနျးမရယျ ဟငျ့ ကိုရယျ သက်စု ကနြေျာ့ရငျခှငျထဲ ပွနျတိုးဝငျလာတယျ။ လကျခြောငျးလေးတှကေ ပြော့ ခှနေလေတေဲ့ ကနြေျာ့လီးကို အသာဆုပျကိုငျလိုကျတယျ။ တယုတယ ဆုပျကိုငျလိုကျတဲ့ ခဈြသူ့လကျနုနုလေးတှေ အထိအတှေ့ ကွောငျ့ မကွာခငျ ကနြေျာ့ကောငျ ပွနျထောငျမတျလာတော့မယျ။ ဒီအခါ သက်စုကို နောကျထပျရသတမြိုးနဲ့ ပွီးအောငျ လိုးပေးဖို့ ကြ နေျာ့တာဝနျ။ ။
ကို့သဲလေးက ယူနီဖောင်းလေးနဲ့ လွလိုက္တာကြာ ခါးတိုအင်္ကျီအဖြူ နီရဲရဲထဘီလေးနဲ့ ယဉ်ယဉ်လေးလှနေတဲ့ ချစ်သူလေးကို ကျ နော် ကြည့်ငေးနေမိတယ်။ ပြီးတော့ ကုတင်စောင်းမှာ ထိုင်ရင်း ခါးကိုဆွဲဖက်လိုက်တော့ သက်စုခိုင် အသာရုန်းတယ်။ ထဘီလဲ လိုက်ဦးမယ်ကိုရယ် မလဲနဲ့ကွာ။ ဒီယူနီဖောင်းလေးနဲ့မှ ပိုလိုးကောင်းမှာ သက္စုက ကျနော့်ကိုမျက်စောင်းထိုးတယ်။ ကို့ခ်စ်သူ သူနာပြုဆရာမလေးကို ယူနီဖောင်းဝတ်လေးနဲ့ ပိုလုပ်ချင်လို့ ဟွန်း အဝတ်တွေ ပေကုန်မှာပေါ့ ပြန်လျှော်ရင် စင်ပါတယ် သက်ရဲ့ ပြောရင်း ထဘီနီလေးပေါ်က ပေါင်သားအိအိကို လက်နဲ့ပွတ်သပ်ပေးနေလိုက်တယ်။
သက္စုက ခေါင်းပေါ်ဆောင်းထားတဲ့ ကဒ်အဖြူလေးကို ချွတ်ပြီး ကျနော့်ရင်ခွင်ထဲ ခေါင်းလေးတိုးဝင်တယ်။ ထူပြည့်ပြည့် နီနုနု နှုတ်ခမ်းသားလေးကို ပြွတ်ခနဲ ကျနော် ငုံနမ်းစုပ်ယူလိုက်ရင်း ခါးလေးကို တင်းတင်းဖက်ထားလိုက်တယ်။ နှုတ်ခမ်းချင်း နမ်းစုပ်သံ တပြွတ်ပြွတ်နဲ့အတူ သက္စုရဲ့ ညည်းသံလေး။ အင်္ကျီပေါ်ကနေ နို့မို့မို့လေးကို အသာဆုပ်ညှစ်တော့ အင်းဟင်းဟင်း ကိုရယ် သ က္စုလက္ကေလး ကျနော့်ပေါင်ကြားထဲ ဝင်လာတယ်။ တောင်မတ်နေတဲ့ ကျနော့်ဒုတ်ဟာ လက်နွေးနွေးလေးရဲ့ အထိတွေ့ကြောင့် ဒုံးပ်ံ ပမာ။ ပုဆိုးကို ချွတ်ပစ်လိုက်ပြီး ကျနော့်ဒုတ်ကို သက္စု ပွတ်သပ်ဆုပ်ညှစ်တယ်။ ကစ်ဆင်ဆွဲနေရင်းကနေ ကြီးလိုက်တာကိုရယ်။ ဟိုတခါလောက် မကြမ်းနဲ့နော်။ သဲနာလို့ အင်းပါ။ ဒီခါ ဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကောင်းကောင်း လိုးပေးမယ် အဟင့် သက်စုထဘီနီလေး ကို အပေါ်လှန်တင်ပီး ကျနော် ကိုယ်လုံးချင်းပူးကပ်လို့ ကုတင်ပေါ် လှဲချလိုက်တယ်။
ကျနော်နဲ့ သက္စုရဲ့ လိုးခန်းအကြောင်း မပြောခင် ပြောစရာတချို့ အရင်ပြောမယ်နော်။ သက္စုက ကျနော့်ထက် ငယ်တယ်။ သူနာပြု သင်တန်းဆင်းပြီး ဆေးရုံမှာ တာဝန္က်စ။ အသက္က ခုမွ ၂၃ နှစ်။ ကျနော်နဲ့ ရည်းစားဖြစ်တာ တစ်နှစ်ကျော်ပြီ။ ဒါပေမဲ့ နို့ကိုင် ဂွင်းထု တ ယောက်ပစ္စည်း တယောက် ကိုင်ဖူးရုံပဲ။ သက္စုကို လိုးခွင့်ရတာ ခုမွ ၃ကြိမ်မြောက်ပဲ ရှိသေးတယ်။ လူကြီးတွေ ခရီးသြားလို့ အိမ်မှာ ကျနော်တယောက်တည်း ရွိတဲ့ည သက္စုကို ခေါ်အိပ်တာ။ ပထမေတာ့ သူ မအိပ်ရဲဘူး ဘာညာ ငြင်းသေးတယ်။ တော်ကီပစ်ရတာ ပေါ့။ အဲဒီည အတူအိပ်ရင်း အောကားအတူကြည့်ပြီး အရလိုးလိုက္တာ။ ပါကင်လေးကို ဖြုတ်ခွင့်ရခဲ့တာ။ ကျနော် ကံကောင်းပါ တယ်။ သက္စုက ကျနော်နဲ့မှ ရည်းစားဆိုတာကို သိတာ။ ကျနော်က သူ့အချစ်ဦးပေါ့။ ပထမဆုံး ယောက်ျားအထိအတွေ့တွေ သက္စု အတော်ဖြတ်သန်းလိုက်ရတယ်။ ဥပမာ နို့စကိုင် နှုတ်ခမ်းစစုပ်တုန်းကတို့၊ သူ့အဖုတ်ကို ကျနော် စကိုင်တုန်းကတို့။ လက်နဲ့ ပါကင် အဖုတ်မို့အိအိလေးကို စကစားပေးနေချိန်ကဆို နှုတ်ခမ်းကို အတင်းကိုက်ပီး အော်ညည်းတာ။ တော်သေး လူမရွိတဲ့ နေရာမှာမို့ပေါ့။
သက်စုလက်လေးထဲ ကျနော့်ဒုတ် ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ ပထမအကြိမ်ကဆိုရင် တကိုယ္လုံး ဓာတ္လိုက်သလို တုန်နေတာ။ သူနာပြုတက် လိင်ကိစ္စ စာထဲသင်ရပေမဲ့ တကယ့်ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ စံချိန်မှီလီးတံကြီးကို ထိတွေ့လိုက်ရချိန်မှာ အပျိုစစ်စစ်လေးသက်စု ဘယ်ခံနိုင်မလဲ။ နောက်ပိုင်းတော့ လီးကို အရမ်းကြိုက်ပဲ။ အဖုတ်ထဲ မဝင်ဖူးခင်ကတည်းက ကျနော့်ဒုတ်ကို စွဲနေတာ။ ပထမဆုံး လီးစုပ်ခိုင်းတုန်းက မျက်ရည်ပါကျတယ်။ ပြီးတော့လည်း အစုပ်ကျွမ်းသွားတာပါပဲ။ ကဲ ကျနော်တို့လိုးပွဲ စမယ်နော်။ တတိယ အကြိမ်မြောက် သက်စုအဖုတ်ထဲ ကျနော့်လီးသွင်းခန်းပေါ့။ စောစောကပြောသလို ကုလင်ပေါ်လှဲအိပ်ပြီး တေယာက္ကို တယောက် နှူးဆွပေးနေရင်း အဖုတ်ဝထဲ အသာလေး ဒုတ္ကို ဖိသွင်းလိုက်တယ်။
အ ကို ရွှီး ကျပ်စီးနေတဲ့ အဖုတ်ပေါက်လေးထဲ ကျနော့်လီး တဆုံးတိုးဝင်သွားတယ်။ အို ကျစ်ကျစ် ထိလိုက္တာ ကို့လီးကြီးကို ချစ် တယ် သဲက ကို့ကိုချစ်တာလား ကို့လီးကို ချစ်တာလား အဟင့် ကို့လီးကို ပိုချစ်တာကွယ် ချစ်ဦးကွာ ကဲ ဖတ္ခနဲ ကျနော် ဆွဲ ဆောက်တယ်။ အို့ ကို ကို အဟင့်ဟင့် အရင် ၂ခါ လိုးဖူးပေမဲ့ ခုလို ယူနီဖောင်းနဲ့ မဟုတ္ဘူး။ အိမ်နေဝတ်စားကို ချွတ်လိုးတာ။ ခု ကျ နော် ပိုဖီးလာနေတယ်။ ချစ်သူစဖြစ်တည်းက တနေ့ကျရင် သက္စုကို ယူနီဖောင်းလေး ဝတ်ခိုင်းပီး လိုးမယ္လို့ ကြုံးဝါးထားတာလေ။ သက္စုရဲ့ တင်ကားကားလေး ထဘီနီလေးနဲ့ သိပ်ကြည့်ကောင်းတာကိုး။
ကျနော် ချစ်သူရဲ့ဖင်သားကို ထဘီကြားနှိုက်ပြီး ဆွဲညှစ်ရင်း လိုးတယ်။ အင်္ကျီကို နှိပ်သီးဆွဲဖြုတ်၊ ဘော်လီလှန်တင်ပြီး နို့ကို တပြွတ်ပြွတ် စို့တယ်။ ယားတယ်ကွယ်။ အဟင့် ချစ်လား သဲ ချစ်တယ်။ ဟင့် ဖြည်းဖြည်းလုပ်လို့ ကျနော် စိတ်ထပြီး အား ပါသွားတယ်။ တချီးပြီးရင် လီးစုပ်ပေးနော် သက် အင်းပါကွယ် လှေကြီးထိုးနဲ့ပဲ တချီ ဆွဲလိုးနေမိတယ်။ သက္စုက တဟင့်ဟင့်နဲ့ သူချစ်တဲ့ ကျနော့်လီးအရသာကို ခံစားနေတယ်။ ကို့ရဲ့နာစ်လေးကို ကိုသိပ်ချစ်တယ် အဟင့်။ ကိုက ယူနီဖောင်းနဲ့ဆို ဘာလို့ ပို ကြိုက်တာလဲ ဆွဲဆောင်မှုရှိလို့ပေါ့သဲရဲ့။ ကို သဲကို ယူနီဖောင်းလေးနဲ့ မြင်ရင် လီးပိုတောင်တာ အိုကွယ် ထဘီနီလေးအောက်က အိုးလုံးလုံးလေးကို ပြေးညှစ်ချငိရော ဟင့် ကိုမွမဟုတ္ဘူး။ ယောက်ျားအတော်များများ သဲတို့လို နာစ်လေးတွေကိုဆို အိုလိုးချင် တာ အို ဘာလို့လဲ နာစ်တွေက အပြုစုပိုကောင်းတာတဲ့။ ဒါထက္ကို နာစ်ယူနီဖောင်းလေးနဲ့ မိန်းမက လိင်စိတ်ပိုထစေတဲ့ ပုံစံလေး ကိုးကွယ် ပြောရင်း ဆွဲလိုးတယ်။ ပါးတွေကို နမ်းတယ်။ နို့သီးခေါင်းကို ဆွဲငုံတယ်။
အ။ အဟင့်ဟင့်။ ဆောင့်ကွာ အားရပါးရ ကျနော် ဆွဲလိုးရင်း လေရေတြ တပစ်ပစ် ပန်းထွက်ကုန်တယ်။ အို ကိုပြီးသွားပီ။ ကောင်း လား အင်းပေါ့ သဲ မပြီးသေးဘူးကွယ် ပြီးအောင် လုပ်ပေးမှာပေါ့ သဲရဲ့ ကျနော်က လီးကို ဆွဲချွတ့်ပီး သက္စုကို ဖက်ထားလိုက် ရင်း ခနနားတယ်။ လက္က နို့စိုင်လေးတွေကို ကစားပေးနေတယ်။ သက္စုက နည်းနည်းပျော့သွားတဲ့ ကျနော့်လီးကို ပွတ်သပ်ကစား ပေးနေရင်း ဒါနဲ့လေ ယောက်ျားတွေက တကယ်ပဲ သူနာပြုဆရာမလေးတွေကို လိုးချင်ကြတာလား တကယ်ပေါ့ သဲရဲ့။ ကိုဆို အခု ယူနီဖောင်းလေးနဲ့ လိုးရတာ သိပ်ကောင်း။ ငါ့ခ်စ်သူ နာစ်လေးပါလားလို့ တွေးလိုးတာ။ ဒါမို့ မြန်မြန်ပြီးသွားတာ အဟင့် ဒါမို့ဟုတ် မယ်။ သဲ ဆေးရုံသွားရင် တချို့ယောက်ျားတွေ သဲကို ကြည့်တာ မျက်လုံးကျွတ်မတတ်ပဲ ထူးဆန်းတယ်။ ကျနော် တမျိုးလေး ခံစား လိုက်ရတယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူကို တခြားယောက်ျားတွေကြည့်တာ စိတ်တော့တိုသလိုလိုပဲ။ ဒါပေမဲ့ ခုလို လိုးနေချိန် ပြောတော့ ရင်ထဲ တမျိုးပဲ။
ဘယ်နေရာကို ကြည့်တာလဲ ကိုကလည်း နောက်ပိုင်းကိုပေါ့ ဒီနေရာကိုလား လို့မေးရင်း သက္စု ဖင်သားနှစ်ဖက်လုံးကို လက်နှစိ ဖက်နဲ့ ဆုပ်နယ်လိုက်တယ်။ ဟင့် ကြည့်မှာပေါ့ ကို့ခ်စ်သူ ထဘီနီလေးနဲ့ အိုးကော့ကားကားလေးက လမ်းလျှောက်ရင် တုန်တုန်အိ အိ ဘယ်ညာလှုပ်နေတာကို အင်းနော် ကြည့်ရင်း သက္ကို သူတို့လိုးချင်မှာပဲ။ ဒီနာစ်လေးကို လိုးလိုက်ရရင်တော့ကွာ တို့၊ ထဘီနီ လေး လှန်တငိပြီး အိုးလေးထဲ လီးသွင်းရရင်တို့ မှန်းနေကြမှာ အာ ကိုကလည်းနော်။ မဟုတ္တာ တကယ်။ အဲ့တင်ပါးနှစ်ဖက်နားက စောက်ပတ်ကြီးကိုလည်း မြင်ယောင်ကြည့်ကြမှာ အွန်း ပြောရင်း ကျနော် စိတ်ထလာတယ်။ ဖတ္ဖူးတဲ့ အပြာစာတွေထဲက ကတ် ကိုး စိတ္ဆိုတာ ဒါမ်ားလား။ ကိုယ့်ချစ်သူ ကိုယ့်မိန်းမကို တခြားသူနဲ့ ပေးလိုးချင်တာမျိုး။ ကျတော်ကတော့ လက်တွေ့မှာ ပေးမလိုး ချင်ပါဘူး။ စိတ်ကူးနဲ့ ဆိုရင်ကော။ ရင်ထဲ တလှပ်လှပ်ဖြစ်သွားတယ်။
သဲကို သဲနဲ့နီးစပ်တဲ့ ယောက်ျားတွေ မှနိးထုကြမှာပဲကွာ ကိုနော်။ မဟုတ္တာ ဟုတ်တယ်။ ကို့သဲက လိုးချင်စရာလေးကို။ ယောက်ျား တွေ ဂွင်းထုတဲ့အခါ သဲကို မှန်းမှာပေါ့ စိတ်ဆိုးမှာစိုးပေမယ့် သက္စု စိတ်မဆိုး။ စိတ်မဆိုးတဲ့အပြင် ကျနော့်ကို ပိုတိုးဖက္ကာ လီးကို တင်းတင်းဆုပ်တယ်။ ကျနော့်ဒုတ် ထောင်းခနဲ တောင်တက်လာတယ်။ သဲ ဟင် ကို သဲကို ဘယ်လိုမှန်းကြလဲ သိလား ဟင့်အင်း နားထောင်ချင်လား ပြောကြည့်လေ ကို ဥပမာ သဲ သူငယ်ချင်းတယောက်ယောက် ဂွင်းထုတဲ့အခါ သဲကို မှန်းတယ် ပေါ့။ သူက လက်နဲ့ လီးကို ကိုင်ထုရင်း စိတ္ကူးထဲ သဲကို လုံးတီးချွတ်လိုက်မယ်။ ပြီး သဲနို့လေးကို ညှစ်မယ်။ ပါးစပ်နဲ့စို့မယ် အို အ ဟင့် ကျနော်ထင်တယ်။ သက္စု ဖီလ်းလာပုံရတယ်။ ဒါနဲ့ ပိုဖီလ်းအောင် သူ့အဖုတ်ကို လက်နဲ့ပွတ် အေစ့ကို လက်ကြားညှပ်ချေပေး ရင်း ဆက်ပြောတယ်။ စိတ္ကူးထဲ သဲအဖုတ္ကို ခုလို ကိုင်ကစားမယ် အို အစေ့လေးကို ကိုချေသလို သူချေနေမယ် အဟင့် ပြီး သဲ အဖုတ်ထဲ သူ့လီးကြီး ထိုးသွင်းပီး သက်စုရယ် သက်စုရယ် လို့ စိတ္က ရေရွတ်ပြီး သဲကို လိူးနေသလို ခံစား ဂွင်းတိုက်တာပေါ့ ကို ရယ်။
တမျိုးပဲ။ သဲ စိတ်လှုပ်ရှားလိုက်တာ။ အရင်က အဲဒါမျိုး မေတြးမိဖူး။ ကိုပြောမှ တွေးမိတော့တယ် ကျနော် ပိုရင်ခုန်သွား တယ်။ သက္စုကို ကျနော် အဲဒီလို ခံစားစေချင်တာလေ။ သဲကို အဲ့လိုမှန်းပြီး စိတ်ကူးနဲ့ တက်လိူးနေကြတဲ့သူတွေ နည်းမှာမဟုတ်ဘူး အဟင့် သက်စုအဖုတ်ထဲ ပန်းထည့်နေတယ်ဆိုပြီး လေရေတြ ပန်းထုတ်ကြတာလည်း မနည်းလောက်ဘူး ဟင့် သဲ တွေး ကြည့်စမ်း။ သဲ ပတ်ဝန်းကျငိမှာ သဲကို ဘယ်သူ မှန်းထုလောက်မလဲ သက္စုက ခနစဉ်ူစားတယ်။ ပြီးတော့ ကို သိလား။ သဲ ခု တွေး မိပြီး ရင်အရမ်းခုန်လာတယ်။ သဲနဲ့ ဆယ်တန်းအတန်းတူ သူငယ်ချင်းတွေ သဲကို ကြိုက်တဲ့သူတွေ ရွိတယိ။ သဲပြန်မကြိုက်ခဲ့လို့။ သူ တို့ရော သဲကို အဲ့လိုပဲ မှန်းမှာပေါ့နော် အင်းပေါ့။ ဆယ်တန်းက ဂွင်းထုတတ်နေပီလေ သဲရ။ အဲ့ကတည်းက သဲကို မှန်းလိုးကြမှာ ပေါ့ အ ကိုရယ် ကျနော် သူ့အစေ့ကိုပိုချေပေးတယ်။
လက္တဖက္က နို့ကို ကစားပေးတယ်။ သက္စု အတော်ဖီးလ်တက်လာမှန်း သိသာတယ်။ အသံလေးက လွိုက္ဖိုလို့။ သဲလေ ပြောပြမယ် ကိုရယ်။ ကိုစိတ္ဆိုးမလားပဲ။ သဲ ခုမှပြန်စဉ်းစားမိတာ။ သဲအကိုဝမ်းကွဲလေ။ နှစ်ဝမ်းကွဲလောက်တော့ တော်တယ် အင်း ကိုတော့ သူ့ ကို မသိဘူး။ ကိုသီဟထွန်းတဲ့။ သူ အိမ်လာချိန်မှာ သဲက ရေချိုးပီး အိမ်ခန်းထဲဝင် ထဘီလဲနေတာ။ သူ ဟိုဘက်ခန်းထဲ ဝင်ပြီး သဲ ထဘီလဲနေတာကို ခိုးကြည့်တာ။ သဲက အမှတ်မထင် မြင်တော့ သူ လွစ္ခနဲ ထွက်သွားတယ်။ သဲလည်း မသိမသာ နေလိုက်တယ်။ အဲ့ ညေနက သူချောင်းတဲ့ နံရံအောက်မှာလေ ပစ်ချွဲချွဲနဲ့ ဘာအေရေတြလဲမသိဘူးလို့။ ခုမွ စဉ်းစားမိတာ ဒါဆို ကိုသီဟထွန်းက သဲ ထဘီလဲနေတာ ခိုးကြည့်ပြီး ဂွင်းထုသွားတာပေါ့ ဟင့် သဲအကိုက သဲအဖုတ္ကို လိုးချင်နေတာပဲ အဲ့နေ့က သဲထဘီလဲတော့ နို့တွေ တင်ပါးတွေ ပေါင်တွေ တစွန်းတစ မြင်မှာ။ အဲ့တော့ ဂွင်းထုလိုက်တာပေါ့ အဟင့်ဟင့် သူ့လီးကြီး သဲအဖုတ်ထဲ ထိုးထည့်ပြီး လိုး နေတယ်လို့ သူခံးစားပြီး ဂွင်းထုမှာပဲ။ ခဏခဏ အ သက္စုလက္ကေလးက ကျနော့်လီးကို ဂွင်းတိုက်ပေးနေတယ်။
သဲ ဟင် ကို သဲကို ဖီလ်းအသစ် ပေးမယ်။ မျက်လုံးမှိတ် ဟုတ် မျက်လုံမှိတ်ရက်လေး ဂွင်းတိုက်ပေးတယ်။ ကိုသီဟထွန်း လီး ကို သဲမြင်ဖူုးလား အို ဘယ်လိုမြင်ဖူးမလဲလို့ ကိုသီဟထွန်း လီးက အကြီးကြီးနေမှာပဲ အာ ဘယ်သိမလဲ ကိုသီဟထွန်းက သဲကို လိုးချင်နေတာ။ သူ အာသာပြေအောင် သဲလ က်လေးနဲ့ ဂွင်းထုပေးလိုက်ပါလား ဟာ ကိုနော်။ မဟုတ္တာ သက္စု မျက်လုံးဖွင့် ကြည့်လျက် အော်တယ်။ စိတ်ကူးနဲ့ ထုပေးလိုက်ကြည့်ပါလား ဟင်အင်း။ ကိုနော်။ ဘာလို့ သူမ်ားဟာကို ပေးထုခိုင်းနေတာလဲ သဲ စိတ်လှုပ်ရှားမှာ။ သိလား။ မယုံ စမ်းကြည့် ဟင်အင်ကွာ။ မောင်နှမကို သူတောင် သူ့ညီမကို ဂွင်းထုမှန်းတာပဲ ဟာကြာ ကဲ ပါ။ မျက်လုံးမှိတ်။ ခု သဲကို ကိုသီဟထွန်း ဖက်ထားတယ် ပြောရင်း သူ့ကို အသာလေး ဖက်လိုက်တယ်။ သဲက ကိုသီဟထွန်း လီး ကြီးကို ကိုင်လိုက်။ ပြီး ဂွင်းထုပေးလိုက် အို သူ ပြောတဲ့အတိုင်းတော့ လုပ်တယ်။ ကနော့်လီးကို တရွရွဆုပ်ညှစ်တယ်။ ဂွင်းထု တယ်။
သူက သဲနို့လေးကို ငုံစို့မယ် ပြောရင်း သက်စုနို့လေးကို ငုံပြီး လျှာနဲ့ကလိပေးလိုက်တယ်။ သက္စု တအီးအီး ညည်းတယ်။ တင်ပါးပါ ကြွတက်တယ်။ လက်ကလည်း ကျနော့်လီးကို ဆက်တိုက်ကြမ်းကြမ်း ထုပေးတယ်။ ကိုသီဟထွန်း လီးက ကြီးလားသဲ အဟင့် ကြီးတယ် ကို့လီးနဲ့ ဘယ်သူ ပိုကြီးလဲ ကိုသီဟထွန်းလီးက ပိုကြီးတယ်။ အား အဟင့်ဟင့် ကိုရယ်။ ရင်တုန်တယ် ကဲ ထ။ ကိုသီ ဟထွန်းကို လီးစုပ်ပေးလိုက်နော် အဟင့်ဟင့် ကိုနော် ထပါ ကျနော် ထူပေးတယ်။ သက္စု ထထိုင်တယ်။ မ်က္လုံးမွိတ္ထားလို့ ပြောပြီး ကျနော့်လီးကို ပါးစပ္နား တေ့ပေးလိုက်တော့ သက္စု ဒစ်ဖျားလေးကို ငုံတဟ်။ အား ကောင်းလိုက်တာ ညီမလေးရယ် ဟင့် ပြွတ် ပြွတ် သက္စုက ကျနော့်လီးဒစ်ကို တရွရွ စုပ်လိုက် လျှာလေးနဲ့ ကစားပေးလိုက် စုပ်နေတယ်။ မျက်လုံးလေး မွိတ္လို့ ခံစားရင်းပေါ့။ ကိုသီဟက သဲဆံပင်ကို ဆွဲပြီး သဲ လီးစုပ်ပေးနေတာကို ခံစားနေတယ်။ စုပ် ညီမ စုပ် အု အု စုပ်ကောင်းလား ညီမ ကောင်းတယ် ကိုကြီးရယ် ကျနော် လရေပန်းထွက်ချက်လာတယ်။ ဒါနဲ့ ခဏရပ်ခိုင်းပြီး သဲ အဖုတ်သွားဆေးပါလား ဘာလို့လဲ ကို ပြီး ပြောပြမယ် သက္စုက ရေချိုးခန်းထဲ ဝငိသွားတယ်။ ရေသံကြားနေရတယ်။ ကျနော် သက်စုပြန်အလာကို ရင်တခုန်ခုန်နဲ့ စောင့်နေ တယ်။
ကို လာ သဲ။ အိပ္ခ်။ ပက်လက်လှန်ထား သက္စု အိပ်ရာပေါ် ပက်လက်လှဲတယ်။ အလိုက်သင့်လေး ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ကားပေး တယ်။ အမွေးထူထူလေးနဲ့ ဖောင်းမို့ခုံးထစ်နေတဲ့ သက္စုရဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးက လွတပတေလး။ မျက်လုံးမှိတ် ညီမ။ ကိုကြီး ညီမ စောက်ပတ်ကို မှုတ်ပေးချင်တယ် အို ကျနော် သူ့ပေါင်ကြားထဲ နေရာယူပြီး အဖုတ်လေးကို မျက်နှာအပ်တယ်။ အဟင့်ဟင့် ခု သဲအကို ကိုသီဟ သဲေားက်ဖုတ်ကို စုပ်ပေးတော့မယ် အ လျှာဖျားလေးနဲ့ အကွဲဖတ်လေးကို ထိုးဆွလိုက်တယ်။ ရွှီး ပလပ် ပလပ် ပြွတ် ကိုကြီးရယ် ခု လျှက်နေတာ ကိုသီဟထွန်းနော် ဟင့် အစေ့လေးကို ဆွဲစုပ်ငုံခဲလိုက်တယ်။ အား အဟင့်ဟင့် အ အ အ မိနစ်အတော်ကြာ ကျနော် လျှာစွမ်းပြလိုက်တာ သက္စု တွန့်တွန့်လူး အော်ဟစ်ညည်းညူနေတော့တာပဲ။ နှုတ်ကလည်း ကို ကြီးရယ် ကိုသီဟရယ် လျက်ပါ ဆိုပြီး တမ်းတလို့။ အတန်ကြာတော့မှ ကျနော် အမှုတ်ရပ်ပြီး နေရာယူတယ်။ လီးလည်း အစွမ်းကုန်တောင်နေပြီ။ သက္စု အဖုတ်ဝလေးကို လီးထိပ်တေ့လိုက်တယ်။ တင်ပါးကိုကိုင် လီးဖိသွင်းရင်း ခု ကိုသီဟ ညီမကို လိုး တော့မယ်နော် လိုးပါ လိုးပေးပါ ကိုကြီးသီဟရယ်။ သက္စုကို ကိုကြီးလီးကြီးနဲ့ လိုးပေးပါ ကျတော့် လီးချောင်းပူပူကြီး သက်စု အဖုတ်ထဲ တဆုံးထိုးဖိသွင်းလိုက်တယ်။ စီးပိုင်ကျပ်ထုပ်နေဆဲ အဖုတ်လေးရဲ့ အတွင်းသားတွေက ကျနော့်လီးကို ဆွဲညှစ်တယ်။ ကျ နော် ပြန်ဆွဲထုတ်ပြီးမှ ဆတ္ခနဲ ဆောက်သွင်းတယ်။
ကောင်းလိုက်တာ။ ခါတိုင်းထက် ပိုကောင်းတယ် ကိုရယ် ကိုသီဟရဲ့ လီးအသစ်ကြီးနဲ့ကိုး။ ကြိုက်လား ကြိုက်တယ်။ အ။ အဟင့် ကုန်းပေးပါလား ဟုတ် သက္စု ဒူးလေးထောက်ပြီး တင်လေးကို ပင့်ကော့ပေးတယ်။ ထဘီနီလေးကို ကျနော် ဆွဲလှန်တင်လိုက် တယ်။ ဖြူဝင်းကားစွင့်နေတဲ့ သက်စုဖင်သားစိုင် အိစက်စက်ကြီးကို ဆွဲညှစ်ဖြဲလိုက်တယ်။ ကိုသီဟက ကုန်းထားတဲ့ ညီမကို နောက်ကနေ လိုးမယ်တဲ့ အင့် ဟင့်ဟင့် လိုးပါ လိုးပေးပါ သက္စု အရမ်းဖီလ်းဖြစ်နေပြီ။ ကျနော်လည်း ပိုကောင်းနေတယ်။ ကုန်း ထားတဲ့ ဖင်သားဖွေးဖွေးနှစ်ဖက်အလယ်ကြားက ပြူအစ်နေတဲ့ အဖုတ်နီရဲရဲလေး အဝကို လီးဒစ် ထိုးသွင်းရင်း ကိုသီဟ ညီမလေး စောက်ဖုတ်ကို လီးထည့်ပြီနော် အဟင့် တင်စိုင်ကို အားယူပြီး ကုန်းလျက်အနေအထား ဆောင့်လိုးပစ်တယ်။
အကိုဝမ်းကွဲရဲ့ လီးကြီးနဲ့ လိုးနေတယ်လို့ ခံစားအလိုးခံနေတဲ့ သက္စု အရသာမျိုးစုံ ခံစားနေရမှာ အမှန်ပါပဲ။ ကျနော်နဲ့ သက္စု အဲဒီည က အချီမနည်း လိုးဖြစ်ကြတယ်။ သူ့အကိုဝမ်းကွဲ ကိုသီဟထွန်း ပုံစံနဲ့ လိုးပေးတာကို သက္စု အတော်ခံစားလို့ကောင်းတယ်ထင်ရဲ့။ ခါတိုင်း လိုးတုန်းက အလြန္ဆုံးမွ ၃ချီပဲ။ ဒီတစ်ခါ ငါးချီလောက် နှစ်ယောက်စလုံး အပြီးလိုးလိုက်ဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့စုံတွဲက အပေးအယူမျှတယ်။ အပြင်မှာ မတွေ့ဖြစ်ရင်လည်း ညအိပ်ခါနီးဖြစ်ဖြစ် နေ့ဘက် လူရှင်းရင်ဖြစ်ဖြစ် ဖုန်းပြောရင်း ဖုန်းပေါ်ကလိုး လုပ်ကြတယ်။ ပထမေတာ့ ကျွန်တော်က လိုး၊ သူက ခံပေါ့။ အဲဒီညက ကိုသီဟထွန်းအဖြစ် စိတ်ကူးပြီး လိုးပေးပြီးနောက်ပိုင်း သ က္စုက တခြားဘဲတစ်ပွေနဲ့ ပေးလုပ်ခိုင်းလေ ပိုဖီးလ်လေပဲ။ တစ္ခု ပြောဦးမယ်။ ကျနော့်သက်စုလေးက အဖုတ်အမှုတ်ခံရတာကို အသေကြိုက်တာ။ ကျနော် စပေးလိုက်တာလေ။ တစ်နေ့ ဖုန်း လိုးရင်း ပါးစပ်နဲ့ ပြောလိုးကြရင်း သက္စုက တခြားယောကျာ်းတ ယောက်ကို ပိုက်ဆံပေးငှားပြီး မှုတ်ခိုင်းလို့ရရင် ကောင်းမှာပဲနော် တဲ့။
ကျနော်က တစ်နေ့နေ့ ဖန်တီးပေးမယ်လို့ ပြောထားလိုက်တယ်။ လက်တွေ့မတော့ ဘယ္လြယ္မလဲ။ တဒင်္ဂကောင်းပေမယ့် နောက်ပိုင်း အရှုပ်အရှင်းတွေလည်း ရှိနိုင်တယ်လေ။ ဘာဖြစ်ဖြစ် တနေ့မှာ သဲကို ရအောင်ဖန်တီးပေးမယ်လို့တော့ ကတိပေးထားလိုက်တာပဲ။ နောက်တစ်ပတ်ကျော်လောက် ကျနော်တို့ မလိုးဖြစ်ဘူး။ ဖုန်းထဲ စကားနဲ့ လိုးကြရုံပဲ ရှိတယ်။ လိုးကြတိုင်းလည်း ကိုသီဟထွန်းလီး ကြီးနဲ့ ဇာတ်လမ်းဆင် ပေးခံတာပဲ။ တစ်နေ့ သက္စု ကျနော့်ကို ပြန်ပြောပြတယ်။ ဒီလို သက်စုရေ၊ ညီမေလး။ ဒေါ်ဒေါ်တို့ မရှိကြ ဘူးလား အသံနဲ့အတူ အိမ်ထဲဝင်လာတာက ကိုသီဟထွန်း။ ကိုသီဟထွန်းကို မြင်တာနဲ့ သက္စု ကြက်သီးဥလေးတွေ ထသွားမိ တယ်။ ကိုနဲ့ လုပ်ကြတုန်းက ကိုသီဟထွန်းကို မှန်းစိတ်ကူးခဲ့တာတွေ ပြန်သတိရပြီး သက်စုရင်တုန်သွားတယ်။ အဖုတ်လေးလည်း ဆစ်ခနဲဖြစ်သွားသလိုလို။ ကိုသီဟထွန်းက အိမ်ထဲဝင်လာတယ်။ သက်စုထိုင်နေတဲ့ ဆိုဖာမွာ ဘေးချင်းကပ် ဝင်ထိုင်တယ်။ အသား ချင်းမထိပေမယ့် သက္စု ရင်တဒိတ်ဒိတ်ခုန်သလိုပဲ။ လီးကြီး ကိုသီဟရဲ့ လီးကြီး။ အို ရွက္လိုက္တာ။ သက္စု အလိုလိုနေရင်း ရှိ့တို့ရှန့်တန့် ဖြစ်နေမိတယ်။ ဒီနေ့ ဂျူတီမရှိဘူးလား သက္စု မရွိဘူး ကိုကြီး။ မနက်ဖြန်မှ သြားရမွာ။ ဒီနေ့ Off ရက် အင်း။ ငါလည်း ခု ပျင်းတာ နဲ့ လာလည်တာ ကိုသီဟနဲ့ ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်း ပြောရင်း သက္စု နေရခက်လာတာနဲ့ အခန်းထဲ ဝင်ခဲ့တယ်။ အိမ်မှာ အမေရှိ နေတော့ အမေထွက်လာပြီး ကိုသီဟနဲ့ စကားပြောနေကြတယ်။
သက္စု အခန်းထဲဝင် တံခါးပိတ်ပြီး အိပ်ရာထဲလှဲရင်း အတွေးတွေ အစုံပါပဲ။ ပေါင်ကြားထဲ လက်ထည့်ပြီး အဖုတ်နွေးနွေးလေးကို အုပ်ကိုင်ပွတ်သပ်နေမိတယ်။ စိတ်တွေလည်း အတော်လှုပ်ရှားလို့။ ကိုသီဟရဲ့ လီးကြီးနဲ့သာ အလိုးခံရရင်ဆိုတဲ့ အတွေးတွေက သက်စုရင်ကို ဗလောင်ဆူလာစေတယ်လေ။ သမီးရေ။ သက္စု .. မေမေ အပြင်ခဏသွားဖို့ အပြင်ထွက်လာဦးနော် ဟုတ် မေမေ အတွေးတွေ ပြတ်သွားတယ်။ သက်ပြင်းလေးချပြီး အခန်းပြင်ထွက်တော့ သီဟေတာ့ ပျင်းပျင်းနဲ့ အိပ်ပျော်သွားပြီ။ ညက မအိပ္ထား ရလို့တဲ့။ အိပ်ပါစေ မေမေထွက်သွားတော့ ခြံတံခါးဆင်းပိတ်လိုက်တယ်။ ပြန်တက်လာတော့ ဆိုဖာပေါ် ပက်လက်အိပ်နေတဲ့ ကိုသီ ဟကို ရပ်ကြည့်နေမိတယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုသီဟရဲ့ ပုဆိုးကြားက ဖုဖောင်းဖောင်း နေရာကိုပေါ့။ သက်စုကြည့်ရင်း ရင်တုန်လိုက် တာ။ အနားကပ်သွားမိတယ်။ ကိုသီဟကေတာ့ တခူးခူးနဲ့ ဟောက်တောင်နေသေး။ သက္စု စိတ်တွေ စုစည်းမရတော့ဘူး။ စိတ်ကူးနဲ့ အကြိမ်ကြိမ် အလိုးခံလာရတဲ့ ကိုသီဟရဲ့ လီးကြီး။ ဒီနေရာမှာပါလား။ သက္စု လက်လေးတစ်ဖက်ဟာ ကိုသီဟပေါင်ကြားက ဖု ဖောင်းနေတဲ့ နေရာကို အသာတို့ထိ စမ်းကြည့်လိုက်တယ်။
အို လက်တွေ တဆတ္ဆတ္တုန္လို့။ ပျော့အိနွေးထွေးနေတဲ့ လိင်ချောင်းက သက္စုအဖုတ္ကို ယားယံလာစေတယ်။ အတွင်းခံ ဝတ်မထား တာမို့ လိင်တံပျော့ပျော့ကို ဖြဖြေလး စမ်းကိုင်ထားရင်း တံတွေးမျိုချနေရတယ်။ လက္တစ္ဖက္က အဖုတ္ကို ပွတ်နေမိရင်း။ လက်ကလေး နဲ့ အသာဆုပ်ထားချိန်မှာ ပျော့ခွေနေတဲ့ လိင်တံဟာ တဖြည်းဖြည်း မတ်တောင်လာတယ်။ ဟင့် အကြီးကြီးပဲ။ ကို့ဟာထက် ပိုကြီး တယ် သက္စု ရင်ထဲ လှိုင်းထန်နေတယ်။ ပိုဆိုးတာက အကိုဖြစ်သူရဲ့ လီးကြီးကို ကိုင်ထားရတာမို့ ရင်ခုန်မှုက မြန်နေရောပဲ။ ကိုသီ ဟကေတာ့ အိပ်မောကျနေရှာတာ။ သက္စု ဖီးလ်တက်ပြီး လီးကို ကိုင်ထားတာတောင် မသိဘူး။ အိပ္မက္လိုလို ဖြစ်နေသလားပဲ။
တောင်မတ်နေတဲ့ လီးပူပူကြီးကို သက္စု အတန်ကြာ ဆုပ်ကိုင်ထားမိ တယ်။ အရမ်းလည်း မညှစ်ရဲဘူး။ နိုးသွားရင် ကိုယ်ကျိုးနည်း မှာ။ အသာဖြဖြေလးပဲ အရသာခံရင်းက ခေါင်းလေးကို ငုံ့ချလိုက်တယ်။ ဖူးအစ်နေတဲ့ ဒစ္ထိပ္ကို နှုတ်ခမ်းနဲ့ တဝနမ်းရှိုက်ပစ်လိုက် တယ်။ လီးနံ့က တမျိုးပဲ။ သက္စု သက်ပြင်းချပြီး လီးကို လက်ထဲက လွှတ်လိုက်တယ်။ ဒါတောင် ပုဆိုးပေါ် ထောင်ပြီး မတ်နေတုန်း။ မမြင်ရပေမယ့် ပုဆိုးပေါ်က ဖောက်ထွက်နေတဲ့ လီးမတ်မတ်ကြီးကို သက္စု ငေးကြည့်ရင်း အဖုတ်လေးကို ပွတ်နေမိတယ်။ ပြီး တော့ ဘယ္လိုမွ မခံစားနိုင်တော့တဲ့အဆုံး ကို့ဆီ ဖုန်းခေါ်လိုက်တော့တယ်။ ကို ကိုအားလား သဲ အရမ်းဆာနေပြီကွယ်။ ဖုန်းနဲ့ပြော ရင်း လိုးပေးပါတော့နော် သဲ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။ နေ့ခင်းကြီး အိမ်မှာ လူမရှိတုန်း ဒီလိုကိုရေ။ သဲ အရမ်း ခံစားနေရပြီ။ မြန်မြန် လိုးပေးပါနော် ကို့ရဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်း လိငျကိစ် စကားလုံးတွေကို ခံစားနားဆင်ရင်း ကိုသီဟလီးကြီးကို မှန်းဆလို့ အိပ်ရာပေါ် ပက်လက်ကလေးနဲ့ သက်စုတစ်ယောက် လက်ချောင်းလေးကို ကစားရင်း အာသာဖြေတော့တယ်။
နူးညံ့စိုစွတ်နေတဲ့ စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသား ပန်းလွှာနုလေးကို လက်ချောင်းနဲ့ ပြတ်သပ္ကစား၊ အေစ့ရဲရဲ မာမာလေးကို ပွတ်ချေ၊ တွင်း ပေါက်ထဲ လက်ခလယ်လေး အသွင်းအထုတ်လုပ်ရင်း ကိုကြီးသီဟရဲ့ လီးမာမာကြီး ငါ့စောက်ဖုတ်ထဲ ထိုးထည့်လို့ အဟင့်ဟင့်၊ ငါ့ ကို နမ်းရှုံ့ပေး၊ ငါ့နို့လေးတွေကို ကိုကြီးသီဟလက်နဲ့ ဆွဲညှစ်၊ အို ငါ့ကို ပေါင်လေးကားခိုင်းပြီး အဖုတ်လေးထဲ သူ့လီးကြီးနဲ့ အားကုန် ဆောင့်ပေးနေ အဟင့် ကိုကြီးသီဟရယ်၊ သက္စုကို အရမ်းလိုးပေးပါ၊ မညှာပါနဲ့၊ အဆုံးထိ ကြမ်းကြမ်းဆောင့်လိုးပေးပါနော် စိတ္ကူး ထဲ ကိုကြီးသီဟရဲ့ လိုးဆောင့်ချက်တွေကို မြင်ယောင်တွေးတော အရသာခံ မှိန်းမောရင်း . သက္စု ပြောပြသော ဇာတ်လမ်းကို နားထောင်ရင်း ကျနော့်လီး အစွမ်းကုန် တောင်မတ်လာတယ်။ သက္စုကို ပြတော့ သက္စုက လက်ကလေးနဲ့ ဖွဖွကိုင်ဆုပ်ပေးတယ်။ အဲဒီနေ့က ဒီလိုလေး သဲကိုင်ထားတာပေါ့ ကိုရယ်။ ကိုကြီးသီဟ လီးကြီးလေ။ သဲ စကိုင်တုန်းက ပျော့ပျော့သေးသေးလေး။ ကိုင် ထားရင်းက တောင်တက်လာတာ ကို့ဟာထက် ပိုရှည်တယ်။ ပိုလည်း အလုံးကြီးတယ်၊ သဲ အဖုတ်လေး ကျဉ်ခနဲပဲကွယ် အပေါ်က နေ တက်ခွထိုင်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာ အဖုတ်ထဲ ထိုးထည့် လိုးလိုက်ပေါ့ သဲရာ ခံချင်တာ ကိုရယ်။ မဖြစ်သင့်လို့သာ သဲ လိုချင်နေပြီ လား သက္စု ခေါင်းလေးညိတ်တယ်။ ကျနော့်ပုခုံးပေါ် ခေါင်းမှီတယ်။ သက္စု မျက်လုံးတွေ ရီဝေနေတယ်။ ကျွန်နော် သက္စုကို ရင်ခွင် ထဲ ဆွဲသွင်းလိုက်ပြီးတော့ နှုတ်ခမ်းလေးကို ပြွတ်ခနဲ ဆွဲစုပ်ငုံပစ်လိုက်တယ်။
အင့် ဟင့် ချစ်တယ်ကွယ် လိုးကြစို့နော် သဲလေး ဟုတ် သက္စုက ထုံးစံအတိုင်း ခေါင်းဆောင်းကတ်လေးကို ဖြုတ်ပြီး စားပွဲပေါ် တင်တယ်။ ကျနော်က အင်္ကျီဖြူလေး အောက်က လုံးချွန်မို့တင်းနေတဲ့ ရင်သားတဖက်ကို ဖွဖွညှစ်ဆုပ်ပွတ်သပ်ပေးလိုက်တယ်။ အဟင့် သက္စု ကျနော့်လီးကို လက်နဲ့ဆုပ်ပြီး တချက်နှစ်ချက် ဂွင်းတိုက်ပေးတယ်။ အရင်စုပ်ပေးပါလား သဲ အင်း ကို ကျနော် ကုတင်ပေါ် ပက်လက်လှဲတယ်။ ပေါင်ကြားက ကောင်က မိုးပေါ်မတ်လို့။ ခ်စ်သူက ကျနော့်ဘေးမှာအသာဝင်ထိုင်တယ်။ နှုတ်ခမ်းနီနီ ဖူးဖူးလေးကို နည်းနည်းဟလိုက်ပြီး ခေါင်းလေးငုံ့ချလိုက်တယ်။ စိုစွတ်ပူနွေးနေတဲ့ နူးညံ့ညံ့နှုတ်ခမ်းအစုံဟာ လိင်တံတလျှောက် အရသာအပြည့် ပေးစွမ်းတယ်။ အာငွေ့နွေးနွေးလေးနဲ့အတူ ထိတွေ့ရွေ့လျားနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းသား။ လိင်ချောင်းကို ရစ်ပတ်လိုက်ပြီး အာခေါင်ထဲထိ ဆွဲငုံစူပ်ယူလိုက်တဲ့ အပြုစု။ တချက်တချက် ဒစ္ကို ဖြဲချပြီး ဒစ်ထိပ်ခေါင်းအောက်ခြေက ရသာဖုလေးတွေကို ထိထိ မိမိထိုးဆွပွတ်တိုက်ပေးတဲ့ သက္စုရဲ့ လျှာဖျားလေးကြောင့် ကျနော် ကြွတက်အောင် အရသာခံစားရတယ်။
ပြွတ် ပြွတ် ရွှီး ကောင်းလားဟင် ကို စုပ်ပေးရင်းက ပါးစပ္ကေန လီးကို ခနချွတ်ပြီး ကျနော့်ကို သက်စုမေးတယ်။ ဘာနဲ့မှ မလဲနိုင် ဘူး သက်စုလေးရာ။ သိပ်ကောင်းတယ်။ ကို့အသဲလေးက သိပ်အပြုစုကောင်း သက္စုက ချစ်စဖွယ်မျက်စောင်းလေးထိုးရင်း ဒုတ္ကို ပြန်ဆုပ်ကိုင်လို့ နှုတ်ခမ်းလေးနဲ့ ပြန်ငုံတယ်။ ပါးစပ်ထဲ ပြီးချင်တယ် သဲရယ် ကျွန်တော် သက်စုပါးစပ်ထဲ ပြီးပစ်လိုက်ချင်တာမို့ တောင်းဆိုတယ်။ ခဏခဏစုပ်ပေးဖူးပေမဲ့ တခါမွ ပါးစပ်ထဲ မပြီးဖူးဘူး။ ဟာကြာ ကိုကလည်း လုပ်ပါ သဲရယ် ကိုပြီးလိုက်ချင်လို့ ကိုနော်။ မလုပ်နဲ့ကွာ။ တမျိုးကြီး သဲအတွက် အားရွိပါတယ္ကြ။ နော် ဟင့်အင်းလို့။ ပြီးခါနီးပြောလေ ကိုရာ။ အပြင်မှာပဲ ထုတ် လိုက်ပါနော် မရဘူး။ ဒီတခါတော့ ပေးပြီးကွာ။ နော် သဲလေး ဟင့်အင်းလို့ ပြောရင်း ဆက်စုပ်တယ်။ ကျနော် ရအောင် စည်းရုံး လိုက်တော့လည်း နောက်ဆုံးမှာ ခေါင်းညိတ်လက်ခံပေးရှာပါတယ်။ ပူနွေးစိုစွတ်တဲ့ ခ်စ်သူရဲ့ အစုပ်အငုံ။ ဒါတင်မက သူနာပြု ဝတ်စုံလေးနဲ့ ဆံထုံးလေးနဲ့ ခပ်ချောချော ခ်စ်သူ Nurse လေးက မျက်လုံးလေးစင်းလို့ ကိုယ့်လီးကို တယုတယစုပ်ပေးနေပုံကို ကြည့်လေ ကျနော် အရသာပိုရွိ ပိုကောင်းလာလေပါပဲ။ ဒူးထောက် ခေါင်းငုံ့စုပ်ပေးနေတာမို့ တင်စိုင်လေးက နောက်ကို ကော့ထား ဟန်လေးနဲ့။ ခါးကျဉ်ကျဉ်လေးအောက်က ကော့စွင့်လုံးဝန်းနေတဲ့ ထဘီနီဖုံး တင်သားပြည့်ပြည့်ကို တပ်မက်စွာကြည့်ရင်း ဆန္ဒတွေ အတိုင်းမဲ့။
ချစ်သူ့ခေါင်းလေးကို ထိန်းကိုင်ထားပေးလိုက်တယ်။ ဆံထုံးလေးကို ဘယ်လက်နဲ့ဆုပ်ပြီး အားယူလိုက်တယ်။ အာခေါင်ထဲထိ ဒစ် ထိပ်ဝင်အောင် ဖိသွင်းလိုက်တော့ သက္စု အြတ္ခနဲ ဖြစ်သွားရှာရဲ့။ လှိုင်ထန်တဲ့ ရင်ခုန်နှုန်း၊ တဆစ်ဆစ် ပြေးလွှားနေတဲ့ ဆဲလ်တွေ၊ ရုန်းကြွလာတဲ့ ရမ္မက်၊ တဒုတ်ဒုတ် ခုန်နေတဲ့ သွေးကြောတွေက တဆင့်၊ သူနာပြုယူနီဖောင်းလေးနဲ့ ခ်စ်သူရဲ့ လီးကို အရသာခံ စုပ် ပေးနေတဲ့ သက္စုကို ကျနော် ပိုချစ်မြတ်နိးမိတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ပူနွေးတဲ့ သုတ်ရည်ပြစ်တွေဟာ လိင်တံထိပ်ကနေ သက်စု ပါးစပ်ထဲ ဒလေဟာ ပန်းထွက်ကုန်တော့တယ်။ ကျနော် သက်စုပါးစပ်လေးထဲက လီးကျွတ်ထွက်မသွားအောင် မျက်နှာလေးကို ထိန်းကိုင်ထားတယ်။ လေရေတြ တစက်မကျန်အောင် ညှစ်ထုတ်ပန်းထုတ်လိုက်ပြီးတော့မှ ပါးစပ်ထဲကနေ လီးကို ချွတ်လိုက် တယ်။ မျိုချလိုက်လား သဲ “ ဟွန့် အင်းပေါ့လို့ အရသာ ဘယ်လိုလဲ တမျိုးကြီး ဘယ်လိုမှန်း မသိဘူး ချစ်တယ်ကွာ ကိုရယ်။ ချစ်လွန်းလို့ ကို့အလိုလိုက်ခဲ့တာပါ သက္စုက ပြောရင်း ကျနော့်ဘေး ဝင်လှဲအိပ်တယ်။ လက်မောင်းပေါ် ခေါင်းလေးမှီလို့ လက် ကလေးနဲ့ ကျွန်တော့်ကို သိုင်းဖက်ထားပေးတယ်။
ကျနော်တို့ ချစ်သူနှစ်ဦး စကားပြောဖြစ်တယ်။ ပြောနေရင်းက ကျနော့်လက်ဟာ သက်စုဖင်သားအိအိတွေကို တရစပ် ဆုပ်နယ်ပွတ် သပ်ပေးနေတယ်။ ထဘီနီလေးအောက်က အတွင်းခံကြိုးလေးကို စမ်းကိုင် ရင်း တဖြည်းဖြည်းချင်း အတွင်းခံကို ချွတ်ယူတယ်။ သက်စုလည်း ကူချွတ်ပေးတယ်။ နို့တွေကို နယ်ဖတ်ဆုပ်ညှစ်တယ်။ အတွင်းခံမရှိတော့တဲ့ အောက်ပိုင်းထဲ ထဘီကြား လက်ထည့် ပြီး အတွင်းပိုင်း အသားစိုင်တွေ အနှံ့ကို ခပ်ရွရွလေး လျှောက်ပွတ်သပ်နေတော့ သက္စု ညည်းသံလေး ထွက်လာတယ်။ ပေါက် တွင်းသားလေးတွေဆီ ပုရွက်ဆိတ်ပြေးသလို လျှောက်ကစားပေးတော့ ခ်စ်သူ ဘယ်နေနိုင်မလဲ။ စောက်ဖုတ်လေးကို အသာစမ်း လိုက်မိချိန်မှာတော့ တွင်းပေါက်ဝလေးမှာ အရည်တွေ စိုစွတ်နေပြီ။ ချစ်တယ် ကို အဟင့်ဟင့် သဲရယ် အ ထဘီလေးကို ကျ နော် ခါးအထိ အသာ ပင့်တင်လိုက်တယ်။ မျက်နှာချင်းဆိုင်ပဲ ဆွဲဖက်ပြီး ပေါက်တစ်ဖက်ကို အပေါ် မတင်လိုက်တယ်။ အို့ ကို ပြန် မတ်နေပြီဖြစ်တဲ့ လီးချောင်းကို ခပ်ဟဟဖြစ်နေတဲ့ အဖုတ်ဝလေးထဲ ပင့်ထိုးထည့်လိုက်တယ်။ အွန့် ဖြည်းဖြည်း ကို သက္စု အဖုတ် လေးဟာလည်း အရည်ရွှဲနေပြီမို့ သိပ်ခက်ခက်ခဲခဲ မထည့်ရတော့ဘူး။ ခပ်ကြပ်ကြပ်ပေမဲ့ စးစေးပိုင်နူးညံ့နေတဲ့ စောက်ဖုတ်တွင်းထဲ ကျနော့်လီး တဆုံး တိုးဝင်သွားတယ်။
ကျွတ်ကျွတ် ထိတယ္ကိုရာ ကျနော် ပေါင်လေးကို မကိုင်အားယူပြီး ပင့်ထိုး လိုးဆောင့်ပေးလိုက်တယ်။ အို့ အို ဟင့်ဟင့် ပြွတ် ပြွတ် ရွှီး အ နို့စို့ပေးပါဦး ကိုရယ် ဘော်လီချိတ်လေး ဖြုတ်ပေးတယ်။ အင်္ကျီနှိပ်သီးတွေ တထောက်ထောက်။ ရွှေဝါရောင် ဝင်း စက်အိဖွေးနေတဲ့ ရင်သားမို့လုံးလုံးလေးကို တဖက်ချင်းစီ ငုံတယ်။ စုပ်တယ်။ လျာလေးနဲ့ ကစားပေးတယ်။ အောက်ကနေလည်း ထိုးဆြ လိုးညှောငင့်ပေးနေမှု မလစ်ဟာအောင် အာရုံစိုက်ထားတယ်။ သက္စုရဲ့ တဟင့်ဟင့် ညည်းသံလေးရယ် အဖုတ်ထဲ လီး တိုးဝင်တိုးထွက် အသံတွေရယ် တဖတ်ဖတ် တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ပဲ။ အဲဒီအချိန် ကျနော် စိတ္တစ္ခု ဝင်လာတယ်။ သဲ ဟင် ခုနေ ကိုသီ ဟ ဘေးမှာရှိနေရင် ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ အာ ရှက်စရာကြီး ဘာလို့ ရှက်ရမလဲ သဲရဲ့။ ကိုသီဟက ဘေးမှာ ထိုင်ကြည့်ရင်း ဂွင်းထုချင် ထုပစေပေါ့ ကိုရာ ကဲ ကျွန်တော် အားနည်းနည်းထည့်ပြီး ပင့်ဆောက်လိုးပေးလိုက်တယ်။ အဟင့် ကျွတ်ကျွတ် အ အ ကောင်းတယ်ကိုရာ သက္စု ပေါင်တံလေးကို ပိုဆွဲမတင်လိုက်တယ်။ ဖောင်းမို့နေတဲ့ အရည်ရွှဲရွှဲ စောက်ဖုတ်ဟာ ပိုပြဲဟသွားပြီး ကျနော့်လီးအဝင်အထွက် ပိုချောမွေ့သွားတယ်။
တဖြောင်းဖြောင်း ဆောက့်လိုးပေးနေရင်း သဲ။ ကိုသီဟက ကြည့်ရုံနဲ့ အားမရေတာ့ဘူးတဲ့ ဟင့် ကိုရယ်။ သူက ဘာလုပ်နိုင်မှာမို့ လဲ။ သဲအဖုတ္ကို ကိုလိုးနေတာလေ။ သဲအဖုတ်ထဲ ကို့လီးကြီး ဝင်နေတာလေ ကိုရယ် .. အ စောက်ဖုတ်ထဲ ကို့လီးသွင်းနေပေမဲ့ ကိုသီ ဟလည်း သဲကို လိုးလို့ရပါတယ် ကိုရာ ဟော သူ သဲနောက်ဘက်မှာ ဝင်လှဲအိပ်ချလိုက်ပြီ အဟင့်ဟင့် သက္စု နှုတ်ခမ်းလေး မ ပိတ်နိုင်ဘဲ တအအ တအင့်အင့် ညည်းညူနေတယ်။ ကိုသီဟက သဲနောက်ကနေ ခါးကို ဖက်တယ် အို ပြီးတော့လေ သဲကို ကိုနဲ့ အတူ ကိုသီဟ လိုးပေးတော့မှာ အ ဘယ်လို ဘယ်လိုလဲကွာ ဒီလို သဲ ကျွန်တော် သက်စုဖင်သားစိုင်ကို ပင့်ဖြဲလိုက်တယ်။ ပြီး တော့ တံတွေးရွှဲအောင် ဆြတ္ထားတဲ့ လက်ခလယ်လေးကို သက္စုရဲ့ ခရေပွင့်လေးမှာ ပွတ်သုတ်ပေးရင်း သဲရဲ့ နောက်ပေါက်လေးကို ကိုသီဟ လိုးမှာလေ။ အခု ကိုသီဟက သူ့လီးကြီးကို သက္စု နောက်ပေါက်ဝမှာ တေ့လိုက်ပြီ အား အဟင့်ဟင့် ကိုရေ တမျိုးကြီး ကွာ လက်နဲ့ အပြောသာ လှုပ်ရှားတယ် မထင်နဲ့။ စောက်ဖုတ်ကို လိုးပေးနေတဲ့ လီးအသွင်းအထုတ်လည်း အရှိန်မပျက်စေဘူး။ လ က္ခလယ္ကို တံတွေးပြန်ဆွတ့်ပီး နောက်ပေါက်ဝလေးကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ဖိသွင်းလိုက်တယ်။
အမလေး ရှီး ကို . ကို . သဲ အ သက္စု တကိုယ္လုံး တုန်နေတယ်။ လက်တွေက ကျနော့်ကို ကုတ်ခြစ်တယ်။ ကိုသီဟ လီးကြီး သဲ နောက်ပေါက်ထဲ တိုးဝင်လာပြီ ပြောရင်း လက်တဆစ် ဝင်အောင် မှန်မှန်သွင်းလိုက်တယ်။ ပြောသာပြောတာပါ။ လက်တောင် မနည်းထည့်ရတယ်။ လက်တဆစ်ဝင်သွားချိန်မှာ သက္စု ကတုန်ကရင်ဖြစ်နေရှာပြီ။ စိတ်အတော်လှုပ်ရှားနေမှန်း ခန့်မှန်းမျတယ်။ ကျနော်လည်း ဒီလို ပြောလုပ်နေချိန် ပိုအရသာ တွေ့နေတာလေ။ စအိုကြွက်သားတွေက ကျနော့် လက်ချောင်းကို ဆုပ်ယူဆွဲညှစ်နေ တာ။ ကြည့်စမ်း သူ့ညီမလေးကို ကိုသီဟ လိုးနေပြီ။ စောက်ဖုတ်ကိုတောင်မဟုတ်ဘူး။ ဖင်ကို လိုးနေတာ အီးဟီး ကိုရေ၊ အဟင့် လက်နှစ်ဆစ်လောက် ဝင်တဲ့အထိ ထိုးသွင်းပြီးချိန်မှာ သက္စုဟာ အသက်ကိုတောင် မနည်းရှူနေရတော့တယ်။ ခံစားမွု အသစ်အဆန်းကြောင့် စိတ်လှုပ်ရှားမှုဟာ အရှိန်မြင့်လွန်းနေမယ် ထင်ပါရဲ့။ ကျွတ်ကျွတ် ကိုလည်း ဆောက့်ကွာ အင်းပါ ကျွန်တော် သက်စုစောက်ဖုတ်လေးကို တဖြောင်းဖြောင်း ဆောက်တယ်။ ဆောက်ပေးရင်းကမှ နောက်ပေါက်ထဲ ထည့်ထားတဲ့ လ က္ခလယ္ကို ခပ်ဖြည်းဖြည်း မှန်မှနိလေး အသွင်းအထုတ် လုပ်ပေးတယ်။ စအိုအတွင်းသားတွေကို ပွတ်တိုက်ထိုးဆွပေးတယ်။ ကောင်းလိုက်တာ ကိုရယ်။ ချစ်တယ်။ လိုးပါ အဟင့်ဟင့် သဲကို လိုးပါ ကဲ ကဲ ရှေ့က ကို့လီးနဲ့ သဲစောက်ဖုတ်ကို လိုးနေတယ်။ နောက်ကလည်း ကိုသီဟလီးက သဲဖင်ပေါက်ကို လိုးနေတယ်နော်
အ အ အ သဲ ကြိုက်လား ကြိုက်တယ် ကြိုက်တယ် ကို။ သဲ အရမ်း ကောင်းနေတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားတာ အရမိးပဲ။ ဟင့် စောက် ဖုတ်နုနုလေးကို တရစပ္ထိုးဆြ လိုးနှက်ပေးနေတဲ့ ကျနော့်လီးအရသာကော စအိုပေါက်လေးထဲ ထိုးသွင်းဆွနှိုက်ပေးနေတဲ့ လက်ချောင်းရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ခံစားမှုကြောင့်ပါ ဆိုတော့ သက္စုခမ်ာ ကာမအရသာ အလြိးခံရတဲ့ အရသာကို ရသစုံ ခံစားနေရမဟ်ထင်တယ်။ စကားတောင် မပြောနိုင်တော့ဘဲ ကျနော် ပြုစုသမျှ အရသာခံစားနေတဲ့ ချစ်သူလေးကို ကျနော် အားရပါးရ လိုးရင်း လ ရေထွက်ချင်လာတယ်။ သဲ ကုန်းပေးကွာ ဟင့် သက္စု အလိုက်သင့်လေး ကုန်းပေးတယ်။ ကျနော် ဆက်မလိုးခင် သေချာကြည့် သေးတယ်။ ကုတင်ပေါ်မှာ ယူနီဖောင်းလေးနဲ့ ထဘီနီလေး လှန်တင်ပြီး တင်သားတွေကို စွင့်နေအောင် ကော့ပေးထားတဲ့ သူနာပြု ဆရာမလေးကို ကျနော် ပိုင်ထားရတာ ဘယ်လောက် ကံကောင်းလိုက်သလဲ။ ရုပ်ရည်လည်း ပြောစရာမရှိ၊ အပြုအစု အယုအယ လည်း ကောင်း၊ စိတ္တူကိုယ္တူ အလိုးခံတတ်တဲ့ သက္စုကို ကျနော် သိပ္ခ်စ္တာပါပဲ။
ကျနော် နေရာယူလိုက်တယ်။ ချက်ချင်း မလိုးသေးဘဲ သက္စုရဲ့ တင်နှစ်မွှာကြားက ခရေပွင့်လေးကို ကျနော် ငေးနေမိတယ်။ ကြည့် ရင်း စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ဘူး။ ခရေပွင့်လေးကို လက်ထိပ်နဲ့ အသာပွတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဖင်သားနှစ်ဖက်ကို လက်နဲ့ ဆွဲဖြဲပြီး ကျနော့် မျက်နှာဟာ အဲဒီဖင်သား ဖွေးဖွေးနှစ်ဖက်အလယ်ကို အပ်သွားတယ်။ အို ကို ဘာလုပ်မလို့လဲ သက်လေးကို အရသာသစ် ပေးမလို့ ငြိမ်ငြိမ်နေ စူတူတူ ခရေပွင့်လေးကို ကျနော် လျှာနဲ့ သပ်တင်လိုက်တယ်။ အား ကို ပြွတ် ပြွတ် အီး ကိုရေ ဘယ်လိုလုပ် နေတာလဲ ကျနော် ပြန်မပြောတော့ဘဲ ခ်စ်သူရဲ့ ခရေပွင့်လေးကို ရသလောက်ဖြဲပြီး လျှာထိပ်ကို ထိုးထိုးထည့်တယ်။ အဝေလးကို လျှာနဲ့ ပတ်မွှေကစားတယ်။ ရွှီး သဲကို သတ်နေတာလား ကိုရယ်။ အ အ နေမရတော့ဘူးကို။ အဟင့်ဟင့် သဲ ဒူးတွေ ခွေကျတော့ မယ် အား တရစပ်ပဲ ကျနော့်လျှာကို အလုပ်ပေးနေမိတယ်။ တော်ပါတော့ ကိုရယ် တော်ပါတော့ အ အ ပလပ် ပလပ် ပြတ် အား အဟင့်ဟင့်ဟင့် ခရေပွင့်လေး တံတွေးတွေ စိုစိုရွှဲလို့။ ကျနော် ဒူးထောက်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ လီးပေါ် တံတွေးတွေ ရွှဲနေ အောင် သုတ်ချလိုက်တယ်။ ပြီးတာနဲ့ ဖင်သားကို အားပါးရ ဆုပ်ကိုင် ဖြဲလိုက်ရင်း ကော့ထား သဲ။ ရသလောက် ကော့ထား သက္စု က ပြောတဲ့အတိုင်း ပိုကော့ပေးတယ်။
ကျနော် တယမ်းယမ်းနဲ့ အရည်တရွှဲရွှဲ လီးချောင်းကို သက္စု ခရေပွင့်အဝမှာ တေ့လိုက်တယ်။ ကို အပေါက်လွဲနေ အင့် အို ကျနော့် စိတ် သိပ်ထန်နေပြီ။ လီးဒစ္ကို အဝမွာ အသာတေ့ပြီးတာနဲ့ ဖိသွင်းပစ်လိုက်တယ်။ လီးမှာရော စအိုမွာပါ တံတွေးတွေ ရွှဲရွှဲစိုနေတာ ကြောင့် လီးထိပ်ဟာ လျှောခနဲ ထောင်ူခနဲ စအိုပေါက်ကျဉ်းထဲ တိုးဝင်သွားတယ်။ အား အိ သေပါပြီ ကျနော် သက္စု ဖင်သားကို လက်တဖက်ကိုင် လီးကို ကျွတ်မထွကိအောင် လက်တဖက်ထိန်းပြီး ဆက်ထိုးသွင်းလိုက်တဟ်။ သက္စု ရုန်းတဟ်။ ကျနော် ဖိ ချုပ်ထားတယ်၊။ ကို ပြန်ထုတ် သဲ မခံနိုင်ဘူး အ အခု လိုးနေတာ နင့်ရည်းစား မဟုတ္ဘူး။ ငါ သီဟပဲ သက္စု။ နင့်ဖင်ကို ငါ့လီးကြီး ထည့်လိုးပေးမယ် ကဲ အား အဟင့်ဟင့် နာတယ် ကဲ ကဲ ကဲ ကျနော့် လီးတံ သက်စုခရေပေါက်ထဲ တဝက်ကျော် တရစပ် တိုးဝင် သွားချိန်မှာ သက္စု တအားအား အော်ဟစ်တယ်။ ကျနော်လဘ်း သိပ်မကြမ်းပါဘူး။ ကျဉ်းကျပ်တဲ့ သက်စုဖင်ပေါက်လေးဟာ ကျ နော့်လီးကို ကြောက်ကြောက်နဲ့ ဆွဲညှစ်ထားတာကိုး။
ငါ့လီးကို ကြိုက်လား သက္စု ဟင့် မေးတာ ဖြေလေ ကြိုက် ကြိုက်တဟ် ။ ဖြည်းဖြည်းနော် ကို သဲနာတဟ် ကို မဟုတ္ဘူး။ နင့် အကို ကိုသီဟ နင့်ကို ဖင်ကုန်းခိုင်းပြီး လိုးနေတာ။ ဖင်လိုးနေတာ ပြောရင်း ခပ်ဖြည်းဖြည်း မှန်မှန် သွင်းလိုက် ထုတ်လိုက်။ သက္စု ခမ်ာ အံကြိတ်ညည်းညူရင်း ကျနော့်လီးနဲ့ အလိုးခံနေရတဲ့ ဖင်ပါကင်ဖွင့်ခန်းကို သူ့အကို ကိုသီဟ အမှတ်နဲ့ ခံစားလို့ အ အ ကြိုက် လား ကြိုက်တယ် ဟင့်ဟင့် ဖွတ် ဖွတ် ပလွပ် ကျနော် စိတ်ပိုပြင်းထန်လာတယ်။ ကုန်းနေတဲ့ ကော့စွင့်စွင့် ဖင်သားစိုင် ဖြူဖွေး ဖွေး ကားကားအစုံကို လက်ဝါးနဲ့ ဖြန်းခနဲ ရိုက်လိုက်တယ်။ အ ဖြန်း ဖြန်း ရိုက်လိုက် လိုးလိုက်နဲ့ လရေတွေလည်း ထိန်းမရတော့ ဘဲ ပန်းထွက်သွားတယ်။ ကျနော် သက်စုအပေါ် ထပ်မှီလဲချပြီး ဖင်ပေါက်ထဲ လီးကို တဆုံး စိမ်ထည့်ထားပြီး လေရေတြကို အကုန်အစင် ညှစ်ထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ အတန်ကြာထိ လီးကို မချွတ်သေးဘဲ ဖင်ထဲ ထိုးစိမ်ထည့်ထားရင်း သက္စုကို ဖက္လို့ အမော ဖြေနေရတယ်။ ဆယ်မိနစ်လောက် ကြာမှ သက္စုက အမောပြေပြီလား မျက်စောင်းလေး ထိုးပြီး လှည့်မေးတယ်။ ကျနော် ပါး လေးကို တရွှတ်ရွှတ်နမ်းရင်း ခေါင်းညိတ်လိုက်တယ်။ ချွတ်တော့ ဟွန့် လီးက ပျော့သွားပြီ။ သက်စုဖင်ပေါက်ထဲကနေ ပလြတ္ခနဲ ပြန်ထွက်လာတယ်။
အတော်ဆိုးတယ် ဘယ္လိုလုလဲမသိဘူး အဲလို ဆိုးပေးတာကိုပဲ သက်စုလေး ခ်စ္တာ မလား။ ခပ္ဆိုးဆိုး လီးနဲ့လိုးပေးတာကို ပိုကြိုက် တယ်မလား” ဘယ်သူပြောလဲ ဟောဒီဟာလေးတွေ ပြောတာ ကျနော်က သက္စုရဲ့ အဖုတ်နဲ့ ခေရကို လက်နဲ့ ထိကိုင်ပြလိုက် တော့ ဟွန်း သူမ်ားကို နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး အရမ်းလိုးကြပြီးမှ ဟောဗျာ။ ကို့ချစ်သူလေးကို ခ်စ္လို့ အရသာစုံ ပေးစွမ်းနေတာပါကွာ အဲ့လိုကျပ်ကျပ်လုပ်။ တျခားသူ လီးတွေကိုပါ ကြိုက်သွားမိမှာနော် ကြိုက်ပေါ့။ ကိုက ဖြည့်ဆည်းပေးမှာ အပို တကယ်။ တနေ့ ကိုတို့ လက်ထပ်ပြီးလို့ ကိုလိုးလို့ ဝရင် သဲအဖုတ်လေးကို တခြားလီးနဲ့ ပေးခံစားမယ်။ ခုနလို ယောက်ျား၂ယောက် ပူးလိုးတဲ့ ဖီ လ်းလေးလည်း ပေးမယ် မိန်းမရယ် ဟင့် ကိုရယ် သက္စု ကျနော့်ရင်ခွင်ထဲ ပြန်တိုးဝင်လာတယ်။ လက်ချောင်းလေးတွေက ပျော့ ခွေနေလေတဲ့ ကျနော့်လီးကို အသာဆုပ်ကိုင်လိုက်တယ်။ တယုတယ ဆုပ်ကိုင်လိုက်တဲ့ ချစ်သူ့လက်နုနုလေးတွေ အထိအတွေ့ ကြောင့် မကြာခင် ကျနော့်ကောင် ပြန်ထောင်မတ်လာတော့မယ်။ ဒီအခါ သက္စုကို နောက်ထပ်ရသတမျိုးနဲ့ ပြီးအောင် လိုးပေးဖို့ ကျ နော့်တာဝန်။ ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ထဘီနီနီ အရညျရှနျးနပွေီ
တျောလို့ စမူဆာ ဆုခတြာ